That's so good, right?: September 2009
Posted by Alex Aung at 4:37 PM No comments:
`ညီ ... ဒီဟာကိုပါ တစ်ခါတည်းရွှေ့ပေးပါလား´
` ဟုတ်ကဲ့...´ ချွေးတရွဲရွဲနဲ့ အင်္ကျီက ဗလာ ၊ အသက် ၂၀ ၀န်းကျင်သာရှိသေးပုံပေါ်သည်။ အရင်တုန်းကကုန်ထမ်းဖူးသည်။ ရုပ်ရည်က မဆိုး။ ခန္ဓာကိုယ်က သေချာလေ့ကျင့်ထားတဲ့ လူတွေလို ရင်အုပ်က ကျယ်ကျယ်။ ညိုမောင်းတဲ့အသားအရည်။
ကောက်ကွေးကွေးနဲ့လှိုင်းတွန့်ပုံစံသဘာဝအတိုင်းရှိတဲ့ ဆံပင်။ အဖုအထစ်တွေနဲ့ ညီညာစွာ သူ့နေရာနှင့်သူရှိနေတဲ့ ဗိုက်သားပေါ်က ကြွက်သားတွေ။ ၅ပေ ၁၀ လောက် ရှိတဲ့အရပ်အမောင်း။ အကြောတွေတဖြိုင်းဖြိုင်းထနေတဲ့ လက်ဖျံ၊အရာအားလုံးကို ပေါင်းကြည့်လိုက်လျှင် ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်။
လိင်စွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ ခပ်ထူထူ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံက လည်း ထိုလူငယ်၏ အလှကို ထပ်ဖြည့်ပေးသည်။ ထိုလူငယ်သည် ကုန်ထမ်းဖို့မကောင်း။ porn movie သရုပ်ဆောင် လုပ်ဖို့ကောင်းသည်။ အာ..အတွေးတွေကလည်း...အားနာသွားမိရသည်ပဲ သူကတော့ သူ့အလုပ်သူလုပ်နေသည်။
` အစ်ကို ... ဟိုဘက်က အထုပ်တွေကော ရွှေ့မှာလား´
` အဲ... မရွှေ့သေးဘူး။ ညီ...သွားနားရင်သွားနားတော့ ... လိုရင်အစ်ကိုခေါ်လိုက်မယ်´ ပထမနေ့အလုပ်ဝင်ဝင်ချင်းကို အစွမ်းကုန် လုပ်ပြနေသည်။ သူ ...သနားသွားသည်။ သူက ဒီလိုအသက် အရွယ်မှာ မိဘလုပ်စာထိုင်စားတုန်း။အခုလည်း မိဘ ရဲ့လုပ်ငန်းကို ၀ိုင်းဝန်းကြည့်ပေးရုံပဲရှိသေးသည်။ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်မရပ်တည်နိုင်သေး။ နာမည်..။
ထိုကောင်လေး၏ နာမည်ကို မမေးရသေး။
` ဘာခိုင်းမလို့လည်းအစ်ကို...´ အနားကပ်ပြီးလာပြောတော့ သူ့ဆီက ချွေးနံပြင်းပြင်း ကိုရလိုက်သည်။အရင်ကဆိုရင် နှာခေါင်းကို ပိတ်မိအုံးမည်။ အခုတော့ သူ ထိုကဲ့သို့သော အနံ့တွေနဲ့ယဉ်ပါး လာသည်။ အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင် နှစ်သက်လာသည်။ ခပ်သွက်သွက်ရှိတဲ့ ထိုကောင်လေးကို သူသဘော ကျသွားသည်။
`ညီ့ နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ´
` မောင်အောင် ပါ´
` ဒါဆို မောင်မောင်အောင်ပေါ့´
` မဟုတ်ပါဘူး ... ကျွန်တော့်နာမည်က အောင် တစ်လုံးတည်းပါ´
` ဟ... အဆန်းပါလား.. ကိုယ်..ညီကို အောင် လို့ပဲတစ်လုံးတည်းခေါ်မယ် ဖြစ်တယ်မလား´
` ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ် အစ်ကို´ အောင် ဆိုတဲ့နာမည် တစ်လုံးတည်းကိုခေါ်ကြည့်တဲ့အခါ သူ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားသည်။ သူ တက္ကသိုလ်တုန်းက ချစ်ခဲ့သော မင်းအောင် ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းကိုသတိရသွား သည်။ မင်းအောင်ကို လည်း သူ `အောင်´ ဟုပဲ ခေါ်သည်။ အခု မင်းအောင်က မိန်းမ ရသွားပြီ။
` အစ်ကို့နာမည်ကိုလည်းမှတ်ထားအုံး... ရဲသစ် ... အသက်က ၃၃ ၊မိန်းမ မရှိ၊ လူပျို´ အောင်က ခေါင်းညိတ်ရုံသာညိတ်ပြသည်။
` အောင် ကော... အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ...´
` ၂၂ ရှိပါပြီ ´
` အစ်ကိုနဲ့ ၁၁ နှစ်တောင်ငယ်တာပဲ၊ အစ်ကို ညီလေး အခုထိ အသက်ရှင်အုံးမယ်ဆိုရင် အောင် ထက်တောင်ကြီးအုံးမယ်´ အောင် မျက်နှာ တစ်ချက်ငြိုးသွားသည်။ ညီလေး ဆုံးသွားတုံးက ၁၁ နှစ်လောက်ပဲရှိအုံးမည်။ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်ကနေ တစ်ဦးတည်းသော သားဖြစ်သွားသည်။ တစ်ဦးတည်း သောသား ကလည်းယောကျာ်းစစ်စစ် ဖြစ်နေပေမယ့် ယောကျာ်းတွေကိုသာ ချစ်တတ်တဲ့ ဂေးလ် စစ်စစ် တစ်ယောက်။ အဖေက သိချင်သိပေမယ့် သူ့ကို ဘာမှမပြော။ သူအနေအထိုင်ပိရိတာလည်းပါမည်။ အမေက တော့ လုံးဝ သိပုံမပေါ်။ အမေတို့သဘောတူတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို အားတဲ့အချိန် တွေတွဲပြတော့ သူ့ကို ပိုပြီး ယုံသွားသည်။ ကြည်ပြာ ကတော့ သူ့ကို ယုံကြည်သည်။ ချစ်သည်။ အားကိုးသည်။ သူ က သူမ ကို သနားသည်။ထပ်ပြီးလည်း မလိမ်ချင်တော့။ ကြည်ပြာသာ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်...၊
` ကဲ...အောင်... နားရင်သွားနားတော့...အလိုရှိတာအကုန် အစ်ကို့ကိုပြော...´
` ဟုတ်ကဲ့အစ်ကို ..´ အောင့်ကို မြင်မြင်ချင်း သူ သဘောကျသွားသည်။ အသက်က ငယ်ငယ်၊ တောင့်တောင့်တင်းတင်း၊ အခု ဂိုထောင်ထဲတွင် အောင် နှင့်သူ နှစ်ယောက်တည်း။ သူ့စိတ်တွေက ပုံမမှန်တော့။ ရင်တွေခုန်လာသည်။ အောင် ကိုဖက်ထားချင်သည်။ အသက်က ကွာသည်။ လူငယ်ဆိုတော့ စိတ်က ဆတ်သည်။ သူ လျောက်လုပ်လို့မဖြစ်။ ဒီနေ့မှ အလုပ်ဝင်သူကို ချက်ချင်း သူလုပ်ချင်သလို လုပ်လို့ မဖြစ်။ သူ့အလုပ်က ကုန်တွေကို နယ်တွေကိုပို့ပေးရသည်။ သူ့မိဘပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုန်ကားကြီး တွေထဲကို ကုန်တွေကို သေသေချာချာနေရာလပ်မကျန်အောင်စီပေးရသည်။ ကုန်များကို ညနေ ၅ နာရီ နောက်ဆုံး ထားပြီးလာပို့ကြသည်။ ဒီနေ့ပို့ရမှာက အောင်လံ ကို၊ ဒီနေ့မှ အောင် တစ်ယောက်ပဲဖြစ်နေသည်။ ဘာဘူ က ဒီနေ့အလုပ်မဆင်း။
ဖေမောင် ကလည်း သူ့မိန်းမ ကလေးမွေးလို့မလာ။ အောင် က အသစ်ပေမယ့် သွက်သွက်လက်လက်ရှိသည်။ တစ်ခါပြောရုံနှင့်နားလည်သည်။ နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၄ နာရီ ခွဲနေပြီ။ လာပို့မယ်လို့ဖုန်းဆက်ထားပေမယ့် အခုထိမလာသေး။ တစ်ခါတစ်လေ တော့လည်း ၆နာရီ ကျော်အထိ စောင့်ပေးရသည်။ ဖောက်သည် ပျက်မှာ ကိုလည်းကြောက်ရသေးသည်။ အောင် က ကုန်ထုတ်တွေပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်အိပ်နေသည်။ ပုဆိုးက တိုတို တုတ်တုတ်ဝတ်ထားသည်။ လူငယ်ပီပီ ပေါင်ကို ကားပြီးအိပ်သည်။ ပေါင်ကြားထဲတွင် ဖောင်းဖောင်းလေး ဖြစ်နေသည်။ အတွင်းခံဝတ်ထားပုံရသည်။ ကုန်ထမ်းသမားအနေနဲ့ အတွင်းခံမ၀တ်လျှင် အူကျနိုင်သည်။ အောင်ဘာတွေကို စဉ်းစားနေမှန်းမသိ။ သူ...အောင် ၏ထိုနေရာဖောင်းဖောင်းလေး ကိုကြည့်နေမိသည်။ အောင် ကဒါကိုသိပုံမပေါ်။
သူ ဒါကိုကြည့်ရင်းစိတ်တွေကြွလာသည်။ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ရင်း အောင်အနားကိုသွားမိသည်။ ပြီးတော့
` ဟုတ်...´ အသံနှင့်အတူ ငေါက်ခနဲထထိုင်လိုက်သည်။
` အောင်...အစ်ကို့ကို ခါးချိုးပေးပါလား။ ခါး က မျက်ချင်သလိုလိုဖြစ်လို့။ အောင်...လုပ်တတ်တယ်မလား´
` လုပ်တတ်တာပေါ့... ကျွန်တော်တို့လိုလူမျိုးတွေ အမြဲလိုလို လုပ်နေကျလေ´ အောင့် ကို သနားသွားသည်။သူ ကတကယ် ခါးမျက်ချင်လို့မဟုတ်။ အောင် ၏ ပစ္စည်းနှင့်ထိတွေဖို့အတွက် အကွက် ဆင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။
` ရပါတယ် ... ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်ကသာ အစ်ကို့ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါ. .ကျွန်တော့်ကို အလုပ်ပေးထားလို့လေ။ ကဲ...အစ်ကို ဟိုဖက်လှည့်။ တံတောင်ကိုကွေးပြီး လက်တွေက ခေါင်းရဲ့နောက်ဖက်ကို ကိုင်ထား။´
သူ အောင်ပြောသလိုလုပ်လိုက်သည်။ အောင် က
` နောက်...အစ်ကို နဲနဲကုန်းပေးထား´ အောင် က ရိုးရိုးသားသားပြောသော်လည်း သူ့အဖို့ ရင်တွေခုန်မြန်သွားသည်။
` ရပြီ အစ်ကို...ကျွန်တော် လုပ်တော့မယ်´ ဘုရားရေ။ အောင် ပြောတဲ့စကားတွေက အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးထွက်နေပါရော။
` အင်း ရပြီ´ အောင်က သူ့ထက်အရပ်မြင့်သည်။ အောင့်ရဲ့လက်တွေက သူကွေးထားတဲ့ လက်တွေကို ဖက်လိုက်သည်။
ကိုယ်လုံးချင်းနှစ်ခုပူးကပ်သွားပြီး အောင်ရဲ့ မမာမပျော့ လိင်တံက သူ့ဖင်ကြားထဲကိုကွက်တိလာထောက်သည်။ အောင် က ဒူးကိုအနည်းငယ်ကွေးထားပုံရသည်။ နို့မို့ရှိရင်..ဘယ်လိုမှကွက်တိမဖြစ်နိုင်။ အောင် ချက်ချင်း သူ့ကိုယ်ကို မလှန်ချသေး။ စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်နေနေသေးသည်။ ပြီးတော့မှ တစ်ချက်တည်း ကော့ချ လိုက်သည်။ ` ဂျွတ် ´ ဆိုတဲ့မြည်သံနဲ့အတူ ခါးအဆစ်တွေ ပြေလျော့သွားသည်။
အောင် လက်တွေကို ခွာလိုက်သည်။
` ကောင်းလိုက်တာကွာ၊ ကျေးဇူးပဲ အောင်´ အောင်က သွားတက်လေး ပေါ်အောင်ပြုံးပြလိုက်သည်။
` ရပါတယ် အစ်ကို...ကျွန်တော့်ကို ခိုင်းစရာရှိတာခိုင်းပါ။ အစ်ကို ကျွန်တော့်ကို ညီအရင်းတစ်ယောက်လို လည်း ဆိုဆုံးမနိုင်ပါတယ်။ ´
` အင်း...ဒီနေ့မှ ကုန်တွေကအခုချိန်ထိ လာမပို့သေးဘူးကွာ... အောင် အိမ်ပြန်မိုးချုပ်လို့ဖြစ်ရဲ့လား´
` ဟုတ်ကဲ့ ...ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အမေ့ကို ပြောခဲ့ပါတယ်´
` အေးကွာ...အောင် အလုပ်လုပ်တာ ပထမနေ့မှပဲ...ဟိုနှစ်ယောက်ကလည်း မလာဘူး...အရေးမကြီးဘူး။ မိုးချုပ်ရင် အစ်ကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်´
` ရပါတယ် ...ကျွန်တော် ပြန်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ´ အောင် က ပြောရင်းဆိုရင်းပုဆိုးကို ပြင်ဝတ်လိုက်သည်။ အောက်ခံဘောင်းင်္ဘီအနီရဲရဲလေးဝတ်ထားမှန်းသတိထားလိုက်မိသည်။
` အစ်ကိုလည်းအားနေတာပဲလေ..ဘာမှလုပ်စရာမရှိတာ။ အိမ်ပြန်ရင်လည်း တစ်ယောက်တည်းပဲဟာ´ အောင်ရဲ့နှုတ်ခမ်းထူထူကို နမ်းချင်စိတ်တွေကို မနည်းထိန်းထားရသည်။
` ကျွန်တော့်အိမ်က အဝေးကြီး၊ အစ်ကို ခါးလည်းသိပ်မကောင်းဘူးလေ။ ကားအကြာကြီးမောင်းလို့မဖြစ်ပါဘူး´ အိုး... လူတစ်ယောက်ယောက်က သူ့ကို ဂရုစိုက်တာကို ခံလိုက်ရတော့ သူ့ ပျော်သွားသည်။ ခါးက ဟန်ဆောင်မကောင်းတာ ကောင်လေးရဲ့။
` အောင်က တော်တော် သိတတ်တာပဲ။ အောင် သာအစ်ကို့ညီအရင်းဖြစ်ရင်သိပ်ကောင်းမှာ´
` ဟို... အစ်ကို့ညီက ဘာလိုဖြစ်သွားတာလဲ´
` သွေးလွန်တုပ်ကွေးဆိုပါတော့။ အချိန်နှောင်းမှ ဆေးရုံရောက်သွားလို့ ပါ၊ အစ်ကို့ညီ ဆုံးသွားတုန်းက ၁၁ နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာ။ လောကကြီးအကြောင်းကိုဘာမှတောင် ကောင်းကောင်း မသိသွားရှာဘူး´
`အစ်ကိုဝမ်းနည်းစရာတွေကို မေးမိပြန်နေပြီ၊ ကျွန်တော့်ကို လည်းညီအရင်းတစ်ယောက် လိုခင်နိုင်ပါတယ်´ အောင် ရဲ့ယောကျာ်းပီသတဲ့လေသံကိုက ချစ်ချင်စရာကောင်းသည်။ သူ အရင်က အချိန်တွေကိုပြန်ရောက်သွားသလိုမျိုးခံစားရသည်။ အရင်က သူငယ်ချင်းချစ်သူ အောင် ကိုလည်းသူ ဒီလိုမျိုးရင်တွေခုန်ခဲ့သည်။ အရင် အောင် က သူဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှန်းသိကတည်းက သူ့ကို လုံးဝ အဆက် အသွယ်မလုပ်တော့။
သူအဲ့ဒီတုန်းက တော်တော်ခံစားရသည်။ အခု အောင် ကော....အရင်က အောင် လို လုပ်အုံးမှာလားမသိ။ ဂေးလ်ဖြစ်တဲ့ဘ၀ ကို တစ်ခါတစ်ခါ အင်မတန်ကို ရွှံ့မုန်းမိသည်။
ဒီနိုင်ငံမျိုးက ဂေးလ် ဆိုရင် နှာခေါင်းရှုံ့ကြသည်။ အဆက်အသွယ်မလုပ်ချင်ကြ၊ ကဲ့ရဲ့ဖို့၊ မကောင်းပြောဖို့ လောက်ပဲသိကြသည်။ ထားပါတော့။
` ရပါတယ်... ဟ... ၅နာရီတောင်ခွဲသွားပြီ။ ဟိုလူတွေကလည်းမလာသေးဘူး။ အောင် ရရဲ့လား´
` အိမ်ပြန် နောက်ကျရင် ကျွန်တော် အိမ်ဘေးကို ဖုန်းဆက်ပြီးအမေ့ကိုပြောခိုင်းထားလို့ရပါ တယ်´ အောင် ကိုသူဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှာလဲ။ အောင် မရှိလို့လဲမဖြစ်။
`အမေ စိတ်ပူနေပါအုံးမယ်။ ဘာဘူက လည်းဘာလို့မလာမှန်းမသိဘူး။ မနေ့က အကောင်း၊ ဘာဘူရှိရင် အောင် ပြန်လို့ရတယ်။´
အမေ ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို သူတမင်တကာ ရွေးသုံးလိုက်သည်။ အောင်က သတိထားမိပုံမပေါ်။
` ကျွန်တော့်ကိုအိမ်ပြန်နောက်ကျမှာ မပူပါနဲ့အစ်ကို၊ တစ်ခါတစ်လေတောင် ကျွန်တော် အိမ်ပြန်အိပ်ချင်မှအိပ်တာ´
` စပ်စုတယ်လို့တော့ အစ်ကို့ကိုမထင်ပါနဲ့... အောင် အိမ်ပြန်မအိပ်တော့ ဘယ်မှာသွား အိပ်လဲ´ ဟက်ဟက်ပက်ပက် တစ်ချက်ရီလိုက်သည်။
အောင် ရဲ့ရယ်သံတွေဟာ ခလေးတစ်ယောက်လိုဖြူစင်လှသည်။
` သူငယ်ချင်းအိမ်မှာသွားအိပ်တာပေါ့၊ အမေ က ကျွန်တော့်ကို နားလည်ပေးပါတယ်။ ´
` ဒါဆို အောင် က အိမ်ပိုင်တာပေါ့´ အောင် ခေါင်းတစ်ချက်သာညိတ်ပြသည်။
` ဘာပဲပြောပြော... အမေ့ကို ဖုန်းဆက်ထားလိုက်လေ။ ဖုန်းနံပါတ်ပြော...ကို ခေါ်ပေးမယ်´
` x x x x x x´ နှိပ်ပြီး တအောင့်လောက်ကြာတော့ ဟိုဖက်က လာကိုင်သည်။ သူ အောင်ကို ဖုန်းထိုးပေးလိုက်သည်။ အောင် က စကားကိုတိုတိုတုတ်တုတ်သာပြောသည်။ ပြောသည့်အထဲတွင်..အရမ်းနောက်ကျရင် မပြန်လာတော့ဘူး ဆိုတာပါနေသည်။ အောင် ပြောပြီးသွားတာနှင့်
` ကျေးဇူးပါပဲ အစ်ကို...´
` အောင် မိုးချုပ်ရင်လို့မပြန်ဖြစ်ရင် အစ်ကို့ အိမ်မှာပဲလိုက်အိပ်လေ´ အိမ်မှာညအိပ်ဖို့ သူဘယ်အလုပ်သမားကိုမှမခေါ်။ အမေနှင့်အဖေကတော့ဘာမှပြောမှာမဟုတ်။ သူပြောရင်အားလုံးဖြစ်သည်။
` ရပါတယ် အစ်ကိုရဲ့ ... ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတယောက်က ဒီနေရာကနေ နှစ်မှတ်တိုင် လောက်ပဲဝေးသာ။ သူက သူငယ်ချင်းတွေစုပြီးနေတာဆိုတော့ ကျွန်တော် သွားအိပ်လို့ရပါတယ်။ သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့က ငယ်သူငယ်ချင်းတွေလေ။ ´ သူဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိတော့။
ခက်တာက သူ အောင် ကိုတကယ့်ကို ရင်ထဲကချစ်မိသွားသည်။ အချစ်ဆိုတာ ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်တတ် သလားမသိ။ ချစ်သူတစ်ယောက်လို၊ ခလေး လေးတစ်ယောက်လိုပြုစုချင်သည်။ ယုယချင်သည်။
` အင်း...သဘောပဲလေ၊ အောင် အဆင်မပြေရင် အစ်ကို့ ကိုဖုန်းဆက်လိုက်လေ။ ရော..ဒါအစ်ကို့ဖုန်းနံပါတ်´
` ကျေးဇူးပါပဲ အစ်ကို..´
` အောင်..နောက်တစ်ခါ ကျေးဇူးပါပဲ လို့တခွန်းပြောရင် လုပ်ခထဲက ၅၀၀ ဖြတ်မယ်´
` ဗျာ...´ ပါးစပ်ကလေးကို ၀ိုင်းသွားအောင်ဗျာလိုက်တဲ့ပုံစံလေးဟာ ရင်ကို ပိုခုန်သွားစေ ပါသည်။
` နောက်တာပါကွ... အစ်ကို့ကို ခင်ရင် ကျေးဇူး ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့တော့..ဟုတ်ပလား´
` ဟုတ်´ စကားတွေပြောရင်းနဲ့အချိန်တွေကုန်မြန်သွားသည်။ ကုန် လာပို့မည့်သူက ၆နာရီကျော်မှလာပို့သည်။ ၄ ထုပ် ၅ထုပ်လောက်ပဲရှိသည်။
` အစ်ကို ကျွန်တော် ပြန်လို့ရပြီလား´
` အင်း...ရပြီ..ညီ...ကျေးဇူးပဲ´ ပုခုံးကိုပုတ်ပြီးသူပြောလိုက်သည်။
` အစ်ကို ၅၀၀ ပေး´
` ဟင်...၅၀၀... ´
` ဟုတ်တယ်လေ...ကျေးဇူးပဲပြောရင် ၅၀၀ ဖြတ်မယ်ဆို... အစ်ကို့ကိုကျွန်တော်က လခဖြတ်လို့မရလို့တောင်းတာ´ သူ အားရပါးရရီလိုက်သည်။
` အင်းပါ...ရော့..´ သူငါးရာတန်တစ်ရွက်ထုတ်ပေးလိုက်သည်။
`ကျေး.........အဲ...အာရိဂတို´ အောင် ကငါးရာကိုတစ်ကယ်ယူသွားသည်။ သူကလည်း အောင်ကိုပိုက်ဆံပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိသည်။ အချိန်တွေပိုလုပ်ပေးထားတာပဲမဟုတ်လား။
` ဂျပန်လိုမှုတ်တတ်တယ်ပေါ့...နောက် ဘာနဲ့ပြောပြော ၅၀၀ ဖြတ်မှာ...အခုတော့ အောင် ကိုခွင့်လွတ်လိုက်မယ်´ အောင် ရဲ့အပြုံးက တောက်ပနေ၏။
` မတ အရှိတ´ နောက်နေ့မှမေးရအုံးမည်။ အောင် က ဂျပန်လိုပြောတတ်ပုံရသည်။ သူ တံခါးတွေအကုန်ပိတ်လိုက်သည်။ ဒီနေ့ သူ့အတွက်တော့အပျော်ဆုံးဖြစ်နေတော့သည်။
အိမ်ရောက်ရောက်ခြင်း ရေကိုခပ်ကြာကြာချိုးလိုက်သည်။ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ၇ နာရီခွဲလို့နေသည်။ ဒီနေ့သူဘာမှလုပ်စရာမရှိ။ ဘယ်သူမှလည်းမချိန်းထား။ အေးအေးဆေးဆေး ကုတင်ပေါ်မှာ စာအုပ်ဖတ်မည်ဟုစိတ်ကူးလိုက်သည်။ ဖုန်းသံမြည်လာသည်။ သူ့ကို မောင်မောင် တို့လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့ခေါ်တာပင်ဖြစ်မည်။ ဖုန်းနံပါတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ မောင်မောင် မဟုတ်။
` ဟယ်လို... အစ်ကိုလားမသိဘူး ´ အသံက ကြားဖူးနားဝရှိသည်။
` ကျွန်တော် အောင် ပါ...အစ်ကို..´
` ဟို...ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းအိမ်သွားတာ...ဒီကောင်က အလုပ်ကိစ္စနဲ့ နယ်သွားတယ် တဲ့...အဲ့ဒါ...ကျွန်တော် အိမ်လည်းမပြန်ဖြစ်တာနဲ့´ သူအမှန်ပင်ပျော်သွားသည်။
`ဟုတ်ပြီလေ၊ အောင် အခုဘယ်မှာလဲ...အစ်ကိုလာခေါ်မယ်..´
`ဟို...ရပါတယ်။ အစ်ကို့အိမ်လိပ်စာသာပြောလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်´
`ကျွန်တော် x x x x x x x မှာပါ။ ´
` အေး ...စောင့်နေ...အခုပဲထွက်လာခဲ့မယ်´ သူ ဒီလိုတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးပါ။ သူငယ်ချင်း တွေလာခေါ်ခိုင်းတာတောင် ညဆိုရင်သူကားမောင်းပြီးမသွားချင်ပါ။
နေ့အလင်းမှာသာ သူ ကားမောင်းချင်သည်။ တီရှပ်တစ်ထည်နဲ့ ဘောင်းဘီတို တစ်ထည်ကိုထုတ်ဝတ် လိုက်သည်။ သူသုံးနေကျ CK ရေမွှေးကို ဆွတ်လိုက်သည်။ ကားကို သတိထားပြီးမောင်းလာခဲ့သည်။ သူချိန်းထားသောမှတ်တိုင်တွင် အောင် စောင့်နေသည်။
` အောင်...လာ ..ကားပေါ်တက်´
` အစ်ကို ဆောရီးပဲ.... အစကတည်းက အကိုပြောစကားကိုနားထောင်ရမှာ´ ခပ်ပြုံးပြုံးမျက်နှာပေးနှင့် ခပ်သြသြ အသံတွေက သူ့ကို စွဲဆောင်နေပြန်သည်။
` ရပါတယ်ကွာ... အောင် မစားရသေးဘူးမလား´
` ထမင်းစားချိန်ဆိုတော့ ထမင်းပဲစားချင်တယ်၊´ အောင် ကိုယ်ပေါ်မှ ခပ်ပြင်းပြင်းကိုယ်နံ့ကိုသူရလိုက်သည်။
` ထမင်းစားတာတော့ဟုတ်တာပေါ့ကွ... ဘာစားချင်လဲဆိုတာ...မြန်မာဟင်းလား...တရုတ်ဟင်းလား...ကုလားဟင်းလား...ဒါကိုပြောတာ´
` မြန်မာဟင်းပဲစားချင်တယ်.. အစ်ကိုက မိန်းကလေးကျနေတာပဲ...မွှေးကြိုင်နေတာပဲ´ အောင် ဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲ။ သူ မတွေးချင်တော့။
` ကောင်းပြီလေ။ သိပ်မကြာခင်ရောက်တော့မယ်´ အောင်ကစကားကို နားထောင်ပုံမပေါ်။
` အနံ့က အရမ်းကောင်းတယ်။ အစ်ကိုသုံးတာ ဘာရေမွှေးလဲ...ဈေးကြီးမှာတော့အမှန်ပဲ´ နှာခေါင်းကို တရှုံရှုံလုပ်ကာ အားရပါးရရှုနေသည်။ အောင်က ဒီလိုဆိုတော့ ချစ်စရာကောင်းသည်။
` အောင် ကြိုက်လို့လား။ ´
` ဒါဆိုရင် တ၀ကြီးရှု...´
` အစ်ကို ဘယ်နားမှာ ဆွတ်ထားတာလဲ...´ ဘာလို့ဒီလောက်တောင် စိတ်ဝင်စားနေရတာလဲကောင်လေးရဲ့။
` လည်ပင်းနှစ်ဖက်စလုံးပဲ´ မထင်မှတ်တဲ့ အပြုအမူကို အောင် လုပ်လိုက်သည်။ အောင်က ခေါင်းကို စောင်းပြီး သူ့လည်ပင်းတွေကို လာနမ်းသည်။
` အကိုပဲ တ၀ကြီးရှုဆို´ အောင် တကယ်ပဲရိုးသားတာလား။ ဖြူစင်တာလား။ ဟန်ဆောင်မှုတွေမပါပါစေနှင့်ဟု ကျွန်တော် ဆုတောင်းနေမိသည်။ဟန်ဆောင်မှုကို အလွန်မုန်းသော သူ ကိုယ်တိုင် ဂေးလ် တစ်ယောက်ဖြစ်နေရဲ့နဲ့ မိဘတွေ...သူငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာ ဟန်ဆောင်နေတုန်းပါပဲ။ သူ...အဖြစ်မှန်ကိုပြောဖို့သတ္တိတွေမရှိသေးပါ။
` ဒါဆို အစ်ကို လည်ပင်းမှာ မဆွတ်ထားပဲ ဖင်မှာဆွတ်ထားရင်ကော...အောင် ကနမ်းမှာပဲလား´ သူ တမင်တကာ မေးလိုက်သည်။
` နမ်းမှာပဲ..တ၀ကြီးကို ရှုအုံးမှာ...´ ဘုရားရေ။ ဒီကောင်လေး တကယ့်ကို အာဂလေးပါလား။ သိပ်မကြာခင်မှာထမင်းဆိုင်သို့ရောက်လာသည်။
အောင်က ဆိတ်သားနှင့်စားသည်။ သူက ထုံးစံအတိုင်း ငါးဖယ်နှင့်စားသည်။ လူငယ်ပီပီ ထမင်းကို အားရပါး ရစားသည်။ အောင် ကိုကြည့်ပြီး သူပါ ထမင်းလိုက်ပွဲတွေယူမိသည်။
` အစ်ကို ထပ်ယူအုံးလေ´
` တော်ပြီကွ..အစ်ကိုမစားနိုင်တော့ဘူး၊ အောင် ...ဟင်းမလောက် ရင်ထပ်မှာ... အားမနာနဲ့..ဟုတ်ပြီလား´
` အစ်ကို ... က အစားနည်းလိုက်တာ´
` အရင်ကဆို အစ်ကို ဒီ့ထက်တောင်စားတာနည်းသေးတယ်။ ဒီနေ့က အောင် စားတာကို အားကျလို့လိုက်စားတာ၊ ဗိုက်ကိုတင်းသွားတာပဲ´
သူ အောင် သောက်ဖို့ ရေနွေးကြမ်းပန်းကန်ထဲကို ရေနွေးငှဲ့ထဲ့ပေးလိုက်သည်။ ပန်းကန်ထဲက ထမင်းကို အကုန်စားပြီး တစ်ရှုးနှင့်အားရပါးရ ပါးစပ်သုတ်လိုက်သည်။ အောင် လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေက ဟန်ချက်ညီညီနှင့် ကြည့်လို့ကောင်းနေသည်။ ရေနွေးကို ခဏမျှမှုတ်ပြီး တကြိုက်သောက်လိုက်သည်။
` ဘယ်သွားရမှာလဲ... အစ်ကို အိမ်မပြန်သေးဘူးလား´ သူနာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ၈ နာရီကျော်ကျော်သာရှိသေးသည်။
` ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနဲ့သွားနေကြနေရာက ကမ်းနား ဘောတံတားမှာ လမ်းလျှောက်တာ. ..လေညှင်းခံရင်း စကားပြောတယ်လေ´
` အင်း...မဆိုးဘူး။ ကဲ...သွားကြတာပေါ့´
ကမ်းနား ဘောတံတားကို သူ တစ်ခါမှမရောက်ဖူးပေ။ ကားကို လမ်းကျယ်တစ်ခုမှာ ရပ်ထား လိုက်သည်။ အောင် ကဘေးချင်းကပ်လျှောက်တော့သူ့ထက်သိသိသာသာကို မြင့်သည်။ လမ်းကျယ်ကိုကားလမ်းဖြစ်ကူးချိန်မှာ အောင် ကသူ့လက်ကိုကိုင်ပြီး ဖြတ်ကူးသည်။ သဘောင်္အငယ်စားတွေ ကုန်တင်ကုန်ချ၊ လူတင်လူချ လုပ်သော နေရာဖြစ်သည့်အတွက်အနံ့အသက်တစ်ချို့ကိုရသည်။ လမ်းမီးတိုင် တို့ရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်သာ ခပ်ပျပျလင်းနေသည်။
` ခွေးမသား... လူလိမ် ... ငါတွေ့လို့ကတော့ ဖင်ချလွတ်လိုက်မယ်...´ အမူးသမားတစ်ယောက်အော်ကြီးဟစ်ကျယ်နှင့်အော်နေသည်။
သူတို့ဘ၀တွေက ညညဆို အရက်ဖြူဆိုင်လေးမှာ သူတို့တတ်နိုင်သလောက် တစ်ပက် တစ်ပိုင်း သောက်ကြသည်။ အမြည်းတွေကလည်းစုံစုံလင်လင်တော့မဟုတ်၊ မြေပဲဆားလှော်တောင် တစ်ခါတစ်လေမှ။ သူတို့ရဲ့အသည်းတွေကို၊ ဘ၀အမောတွေကို အရက်ဖြူ တွေနဲ့စိမ်ထားကြပါလား။
` အစ်ကို ဘာတွေတွေးနေတာလဲ... စိတ်ညစ်နေပြီထင်တယ်´ အောင် က လူကဲခတ်တာတော်သားပဲ။
` မဟုတ်ပါဘူးကွာ... လူ့ဘ၀ဆိုတာကြီးကိုတွေးကြည့်နေတာပါ´ အောင်က သူ့ပုခုံးကိုလာဖက်သည်။ စိတ်ထဲတွင် ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုခံစားရသည်။ အောင်ရဲ့ ကိုယ်နံ့ပြင်းပြင်းက စူးခနဲဝင်လာသည်။ ကမ်းနားကလာသော ညှီစို့စို့အနံ့ထက်တော့ အောင် ကိုယ်သင်းရနဲ့ကိုသူ နှစ်ခြိုက်မိသည်။
`ဒီလိုပဲပေါ့အစ်ကိုရာ... တစ်နေ့ကို ထမင်းနှစ်နပ်စားတာခြင်းအတူတူ လုပ်တဲ့အလုပ် တွေကမှမတူတာ...လောကကြီးက မတရားပါဘူးဗျာ... အစ်ကိုပဲစဉ်းစားကြည့်လေ၊ ကျွန်တော်ဆိုလည်း မနက်စောစောကတည်က ဘတ်စ်ကားကိုတိုးဝှေ့စီး၊ မနက်ကမှတော်သေးတယ်၊ ည အပြန်ဆိုရင်
ရုံးဆင်းချိန်ဆိုရင် ငါးပိသိပ် ငါးချဉ်သိပ်၊ အစ်ကိုတာဆိုရင် ဘယ်လိုမှသည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အိမ် ပြန်ရောက်ရင်လည်း ဆူဆူပူပူနဲ့၊ အိပ်တော့လည်းဧည့်ခန်းမှာ အိပ်ရတာ၊ လူပျိုလူလွတ်ဆိုပေမယ့် နေရတာ အိပ်ရတာက လူမြင်ကွင်းမှာပါ။ ´ အောင်က သူ့ဘ၀အမောတွေကို ဖော်ထုတ်ပြနေသည်။
` လူမြင်ကွင်းဆိုတာက... ကျွန်တော် အိပ်တာကို အိမ်ကလူတွေအကုန်မြင်တာကိုပြောတာဗျ။ အစ်ကိုတို့လင်မယားက အခန်းထဲမှာအိပ်ပေမယ့် မနက် မနက် သူတို့မထခင် ကျွန်တော် အရင်ထရတာ အမော၊ အစ်ကို့မိန်းမက စောစောထလို့ ကျွန်တော် ပိုးစိုးပက်စက် ပိုးလိုးပက်လက် ဟိုပေါ်ဒီပေါ်အိပ် နေတာမြင်ရင် မကောင်းဘူးလေ၊ မြင်သူက မရှက်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ရှက်တယ်။ ယောက်ျား လေးချင်းဆိုတော့ရှက်စရာမရှိဘူးလေ။
”မဟုတ်ဘူးလား...´ အောင် က သူ့ကို တကယ့် ငယ်ပေါင်းတွေလို စကားပြောနေသည်။ သူကော..သူ့အကြောင်းတွေ သူ့ဘ၀ရဲ့အမောတွေကို ထုတ်ပြ ရမှာလား။ ဒီကောင်လေး က သူ့ခံစားနေရတာတွေကို နားလည်နိုင်ပါ့မလား။
`ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ အောင်ရ။ သည်းခံလိုက်ပေါ့။ ညီက တော်ပါတယ်။ ကြိုးစားပြီးကိုယ်ပိုင်အိမ်တစ်လုံးဝယ်နိုင်အောင်လုပ်´
` အစ်ကိုက ရီစရာသိပ်ပြောတတ်တယ်၊ ကျွန်တော့်လိုကောင်က ဘယ်လိုလုပ်အိမ်တစ်လုံး ၀ယ်နိုင်ပါ့မလဲဗျာ၊ ကျွန်တော်ရတဲ့လခကအိမ်ငှားတောင်နေနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ ´ ရုတ်တရက် သူ့အရှေ့မှာ လျှောက်နေတဲ့ အသက်ကြီးကြီးလူက ပုဆိုးဖြန့်ဝတ်လိုက်သည်။ မည်းနက်နေတဲ့ဖင်နှစ်လုံးကိုမြင်လိုက်ရသည်။ ဒါတွေဟာ လူ့အဆင့်အတန်းကိုပြတာပဲလား။ သူ မတွေးချင်တော့။
` ဘ၀မှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုမပြောနဲ့ ညီ...၊ နောက်ပြီး ဘယ်တော့မှ အဆိုးမမြင်နဲ့၊ ဘယ်အရာမဆိုကြည့်တဲ့လူ ရဲ့အမြင်နဲ့ပဲဆိုင်တာ၊ ရေတစ်ဝက်ပဲရှိတဲ့ ဖန်ခွက်ကို တစ်ချို့က `ဟာ..ရေ တစ်ဝက်ပဲရှိတယ်´ လို့မြင်ပြီး တချို့က ` ရေ တစ်ဝက်ကြီးများတောင်ရှိသေးတာပဲ´လို့မြင်တယ်။ ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှလက်မလျော့နဲ့။ ပွဲတွေကျပ်နေရင်တောင် ဇွဲခတ်သူတွေက နိုင်စမြဲပါကွာ´ သူပြောတာတွေကို အောင် နားလည်နိုင်မယ်လို့ထင်သည်။ သူ အောင့်ကို လူတော်တစ်ယောက် ဖြစ်စေချင်သည်။ တစ်သက်လုံး ကုန်ထမ်းတဲ့သူဘ၀ကို မဖြစ်စေချင်။
` ကျွန်တော်တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော် ဖြစ်တည်နေတဲ့ ကျွန်တော် ရထားတဲ့ဘ၀ကို စိတ်ကုန်တယ်၊ ဒီအကြောင်းတွေကို တွေးရင်စိတ်ညစ်တယ်ဗျာ... ကျွန်တော် အစ်ကို့လိုမျိုး အေးဆေး လွတ်လပ် လူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်။´ အောင် ဘာကိုဆိုလိုမှန်း သူ မှန်းလို့မရ။ သူ့လိုဘ၀မျိုးကိုတော့ အောင် ကိုမရစေချင်။ ပိုက်ဆံကိုရှာနိုင်ပေမယ့် အခုလို အမှန်တရားကို ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဘ၀၊ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကို သူ မလိုချင်တော့။
ဖြစ်နိုင်လျှင်အားလုံးကို အမှန်အတိုင်းဖွင့်ပြောပြီး စိတ်အေးလက်အေးနေချင်သည်။ သူ အောင် ကိုပြောပြသင့် သလား။ အခုမှ သိတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုပြောပြခဲ့ရင်၊ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာ သူ မတွေးရဲပါ။ ပြီးတော့ သူဟာ တစ်ခြားလူတွေလိုပဲ အမြင်ကျဉ်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ရင်...။
` ကဲ... အစ်ကို့ ကိုအားကျမနေနဲ့ကွ၊ လူဆိုတာ အရာရာမှာ ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူးကွာ၊ တနည်းမဟုတ်တနည်း လိုအပ်နေတာပဲ... လာ... ဟိုဘက်နားမှာ သွားရပ်ကြရအောင်´ ဆိပ်ခံတံတားပေါ်က သံတိုင်တွေကို လက် တင်ပြီး မြစ်တစ်စီးရဲ့ ခွန်အားပါပါစီးစင်းနေသော ညအလှ
ကို သူ တ၀ကြီးကြည့်လိုက်သည်။ ငါးညှီနံ့ကလည်းထောင်းခနဲတက်လာသည်။ အောင် က သူ့ ပုခုံးပေါ်က လက်ကို ဖြုတ်ပြီး ခါးကို လာဖက်ထားသည်။
တစ်ဦးတစ်ယောက်...အထူးသဖြင့် သူနဲ့အတိအလင်းတွဲနေတဲ့ သူ့ ကောင်မလေးတွေ့သွားရင်ကော ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ ကြည်ပြာ က ဒီလိုနေရာမျိုးကို လာမည့်သူတော့မဟုတ်။ လေက တ၀ှီးဝှီးနဲ့တိုက် နေတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလို အေးခနဲဖြစ်သွားသည်။
`အားပါး ... လေကကောင်းလိုက်တာ၊ ချမ်းတောင်ချမ်းလာပြီ´ အောင် က
` ဟုတ်တယ်၊ လေက အေးပြီးစိမ့်နေတာပဲ၊ နေ့လည်က ပူသလောက်...´ နာရီကို သူကြည့်လိုက်တော့ ၉ နာရီတောင်ကျော်သွားပြီ။
` အောင် ...အစ်ကိုတို့ပြန်ကြရအောင်...၉ နာရီတောင်ကျော်ပြီ´
` မပြန်ချင်သေးဘူး။ အစ်ကို ချမ်းနေပြီလား၊...´
` အင်း...နည်းနည်းပါးပါး ပါကွ´
` ကျွန်တော် ဖက်ထားပေးမယ်...ဒါဆို နှစ်ယောက်လုံးမချမ်းတော့ဘူးပေါ့´ အောင်အပြုအမူတွေက သူ့အတွက်ထူးဆန်းနေသည်။
သူလိုချင်နေတဲ့အရာတွေကို အောင် က ကြိုသိနေပုံရသည်။
` ဟာ..ကွာ...ယောကျာ်းနှစ်ယောက် ဖက်နေတာကို တခြားသူမြင်ရင်ရှက်စရာကြီး´ အဖြစ်နိုင်ဆုံးသော အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြင့် သူ ငြင်းလိုက်သည်။
` မသိဘူး၊ ပတ်ဝန်းကျင် ကိုကျွန်တော် ဂရုမစိုက်ဘူး။ အစ်ကိုလည်းဂရုစိုက်မနေနဲ့၊ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး လိုက်ကဲ့ရဲ့နေတဲ့လူတွေကို ကျွန်တော် ကြည့်မရဘူး။ ´ အောင် က ပြောပြီးတာနဲ့ သူ့အနောက်ကနေ ခါးကို သိုင်းဖက်လိုက်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်ချင်းပူးကပ်လိုက်တော့ သူ့ရင်ထဲအထိ နွေးသွား သည်။ အောင် က သူ့ပုခုံးပေါ်ကို ခေါင်းတင်ထားသည်။ သူ ဘာမှထပ်မပြောဖြစ်တော့။
` အစ်ကို မချမ်းတော့ဘူးမလား၊´
` အင်း... အောင် က Heater ကြီးပဲ...´
` အစ်ကိုက မွှေးနေတာပဲ´ ဟော...သူ့လည်ပင်းကို ဒုတိယအကြိမ်နမ်းလိုက်ပြန်သည်။ အောင် က သူဘာကောင်လဲဆိုတာကိုသိရက်နဲ့ သူ့ စိတ်ကိုဆွပေးနေတာလား။ ဒါမှမဟုတ် အောင် က တကယ့်ကို ရိုးသားတာလား။ ခလေးတယောက်လိုဖြူစင်တာလား။
` ဟေ့... ငါ့ကို နမ်းတာ နှစ်ခါရှိပြီ၊ ဘာလဲ...အောင်က မိန်းမငတ်နေတာလား´
` ...´ အောင် ကဘာမှမဖြေ။ သူ သတိထားမိတာက အောင်ရဲ့ ဖွားဖက်တော်လေးက သူ့ကိုခုလုခုလုနဲ့ထောက်ထားသည်။နေ့လည်ကထက်ထွားလာသလိုခံစားရသည်။
` အောင် က heater တောင်မကဘူး။ အပူချောင်းပါ ရှိတာကိုး´
` ဗျာ.....´ အောင် ခဏလောက်တွေသွားသည်။
` အစ်ကိုက ဘာမှမလဲဘူး။ အောင် က သာ...´ သူ့ကို ဖက်ထားတာကနေ မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်သည်။
` ကျွန်တော် တမင်တကာ လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ ကျွန်တော့်ကို စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဗျာ´
` အင်းပါ၊ လာ..အိမ်ပြန်ကျရအောင်၊ မိုးလည်းချုပ်နေပြီ။´
` ဟုတ်... ´ အောင် က တကယ့်ကို ချစ်ဖို့ကောင်းသည်။ ဒီကောင်လေးက မသုံးတာကြာ နေတဲ့ ဖုန်တက်နေတဲ့ သူ့နှလုံးသားကိုပြန်ခုန်လာအောင် လုပ်ပေးနေပြီ။ အောင် ကို သူ ချစ်သည်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ၁၀ နာရီ ထိုးနေပြီ။ အဖေ နဲ့ အမေ အိပ်နေလောက်ပြီ။ သူ တို့အိမ်က ဟောင်ကောင်နှစ်ထပ်အိမ်ဖြစ်သည်။အဖေနှင့်အမေ က အပေါ်ထပ်တွင်အိပ်သည်။ သူ ကတော့ အောက်ထပ် သူ့အခန်းထဲတွင်အိပ်သည်။ အဖေနှင့်အမေက အပေါ်ထပ်တက်အိပ်နေပြီ။ ကိုရီးကားကိုတော့ အောက်ထပ် ဧည့်ခန်းတွင်လာကြည့်တတ်သည်။ တော်ရုံတန်ရုံဆို အောက်ထပ်ဆင်းလာခဲသည်။
` အစ်ကို့ မိဘတွေကော..´
` ကျွန်တော်နဲ့များကွာပါ့...´ အောင် ကို သူသနားသွားသည်။ အောင် သာသူနှင့်တူတူနေလျှင်...ခေါ်ထားချင်သည်။
` ကဲ...ရေမချိုးရသေးဘူးမလား...သွား...ရေသွားချိုး...အစ်ကိုမင်းအတွက် အိမ်နေရင်း အင်္ကျီထုတ်ပေးထာမယ်။´
` ဟုတ်ကဲ့ ´ မျက်နှာသုတ်ပုဝါထုတ်ပေးဖို့သူသတိရသွားသည်။
` အောင်...နေအုံး...မ၀င်နဲ့အုံး...ရော့...မျက်နှာသုတ်ပုဝါ..´ အောင် က အင်္ကျီချွတ်ပြီးနေပြီ။ ညိုနေသော အသားအရောင်နှင့်ကြွက်သားဖုထစ်များက သူ့ကို ရင်ခုန်စေသည်။ ချက် ရဲ့အောက်နားတွင် အမွေးမည်းမည်းလေးတစ်တန်းက အတွင်းခံဘောင်းဘီ အနီရောင်လေးထဲသို့ ၀င်သွားသည်။ မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို သူ ပစ်ပေးလိုက်တော့ အောင် က ဖမ်းယူလိုက်သည်။
` အိမ်ထဲမှာတော့ ပူတယ်နော်...´ ပြောပြောပြီးချင်း အောင် က ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်သည်။ သူ မင်သက်သွားသည်။ သူတစ်ခါမှ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးနှင့် သူငယ်ချင်းအရင်းရှေ့မှာ မနေဖူးပေ။ ဖောင်းကားနေသော အောင် ပစ္စည်းလေးကို သူ ငေးမိသွားသည်။ အတွင်းခံပေမယ့် စကားအရသာပြောရသည်။ လျှော်ပါများလို့ ပါးပါးလျလျဖြစ်နေသည်။ အောင် ရဲ့လိင်တံ အချောင်းလေးက အထင်းသားလေးပေါ်နေသည်။
ဘောင်းဘီဂွကြားတွင် ကောက်ကောက်ကွေးကွေး အမွေးလေးများက ဟိုတစ ဒီတစ ထိုးထွက်နေသည်။
` အစ်ကို... ကျွန်တော် ချိုးတော့မယ်... အစ်ကိုကော..ချိုးအုံးမလား´
` ဟင်´ ငေးကြည့်နေတာနှင့်တင် သူ မောလာသည်။
`အေး...မချိုးတော့ဘူး၊ အစ်ကိုချိုးပြီးသွားပြီ´ ခုံပေါ်ကို ပစ်တင်ထားသော ပုဆိုးနှင့်အင်္ကျီကို သူယူပြီး အ၀တ်လျှော်စက်ထဲထည့်လိုက်သည်။ ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်ပြီးမှ သူသတိရသွားသည်။ အောင် ရဲ့ဘောင်းဘီ..
` အောင်... မင်း အတွင်းခံကို ပေး...အစ်ကို ဒီမှာမင်းအ၀တ်အစားတွေတစ်ခါတည်း လျှော်မလို့´ ရေကျသံနှင့်အတူ အောင်ကအော်ပြောသည်။
` မလျှော်ပေးပါနဲ့အစ်ကိုရ...ကျွန်တော် မနက်ဖြန်ဝတ်စရာမရှိဘဲနေပါအုံးမယ်။´
` အစ်ကို အင်္ကျီပေးဝတ်မှာပေါ့ ...´
` ဟုတ်ကဲ့...ခဏလေး...´ တအောင့်လောက်ကြာတော့ ရေချိုးခန်းထဲကနေ ခပ်နွမ်းနွမ်း ဘောင်းဘီလေးကို တံခါးကို အနည်းငယ်ဟပြီး ထုတ်ပေးသည်။
` အာရိဂတို´ ဂျပန်လိုအော်ပြောပြန်သည်။ အောင် ဘောင်းဘီအနှီလေး သူ့လက်ထဲရောက် လာတော့ သူ စိတ်တွေတမျိုးဖြစ်သွားသည်။ နမ်းကြည့်မည်ဟု တွေးလိုက်သေးသည်။ စိတ်ထဲက တမျိုးဖြစ်သွား တာနဲ့ အ၀တ်လျှော်စက်ထဲပစ်ထည့်လိုက်သည်။ ဒါပေမယ့်...သူဘောင်းဘီကိုင်ထားတဲ့ လက်ကို တော့ နမ်းဖြစ် လိုက်သည်။ အောင် ရဲ့ကိုယ်နံ့ကိုပဲရလိုက်သည်။ အ၀တ်လျှော်ထားချိန်တွင် သူခွေထိုးကြည့်သည်။
မနေ့ကမှ ၀ယ်လာတဲ့ Bruno ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုတော့သူသိသည်။ ဖွင့်ဖွင့်ချင်း စိတ်ပျက်သွားသည်မှာ ခွေကလုံးဝမကြည်သေး။ ရုပ်ရှင်ရုံကနေပြန်ရိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သည်။ အသံကလည်း quality ကမကောင်း။ ဆူညံသံများရောနေသည်။ တစ်ခါတစ်ခါရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်၏ ရီသံတွေ တောင်ကြား ရသည်။ ထိုဇာတ်လမ်းထဲတွင် ဒီဇိုင်းနာဂေးလ် သြစတေးလျားသား Bruno က နာမည်ကြီး ချင်သည်။
Superstar တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သည်။ ဒါပေမယ့်သူလုပ်လိုက်တိုင်းက တစ်ခုမှအချိုးမပြေ။ ထားပါတော့။ ဘာလို့များ လူတွေက ဂေးလ် တွေဆိုလျှင်ရယ်စရာ မောစရာ သတ္တ၀ါအဖြစ်သဘောထားကြလည်းမသိ။ မြန်မာပြည်က ဇာတ်လမ်းတွေဆိုလျှင်ပိုဆိုးသေးသည်။ ဂေးလ် တိုင်းကပဲ ယောကျာ်းဆိုရင် ငမ်းငမ်းတက် သတ္တ၀ါမျိုးဖြစ်နေသည်။ Bruno ဇာတ်လမ်းကလည်းဘာမှမထူး။ ဟာသကားဖြစ်သည့်အလျှောက် ဂေးလ် တွေကို ဟာသအမြင်ကပဲရိုက်ထားသည်။ကြည့်နေရင်း သူ စိတ်ပျက်လာသည်။ သူ အခုမှသတိရသည်။ အောင် ရေချိုးတာအခုထိမပြီးသေး။
` အစ်ကို ... ကျွန်တော်...´ ဒီတစ်ခါတော့ သူ မျက်လုံးတွေကျွတ်ထွက်မတတ်ဖြစ်ရသည်။ အောင် က သူ့ပစ္စည်းလေးကို မျက်နှာသုတ်ပုဝါ နှင့်အုပ်ထားသည်။ သူ ပေးလိုက်တဲ့မျက်နှာသုတ်ပုဝါက ခါးပတ်လို့ရလောက်အောင် မကြီးပေ။
` အောင်....ဆောရီး...အစ်ကို မင်းကို ရေလဲပုဆိုးထုတ်ပေးဖို့မေ့သွားတယ်....ဆောရီး...´
` ရပါတယ်အစ်ကိုရ... ကျွန်တော် အော်ခေါ်သေးတယ်...´
` အေး..ဟုတ်တယ်..အစ်ကို က ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေ့သွားတတ်တယ်၊´ အ၀တ်ဗီဒိုကို သူလျှောက်သွားရင်း အောင်ကို သူတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအစား ညီညာစွာ သူ့နေရာနှင့်သူ အဆီမရှိပဲ ကျစ်လစ်နေတဲ့ ယောကျာ်းပီသတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူ ရင်တွေခုန်မိသည်။
အတွင်းခံဘောင်းဘီကြေငြာတဲ့မော်ဒယ်လ်တွေလို။ သူ ၀တ်နေကျထဲက ခပ်ပါးပါး အင်္ကျီနှင့် ပုဆိုးတစ်ထည် ထုတ်ပေးလိုက်သည်။
` ဆောရီးပဲ အောင်...ရော့.. ...ခေါင်းကို သေချာသုတ်အုံး´ သူ့ဆီက ပုဆိုးကို လှမ်းယူသည်။ အောင် က ပုဆို့ကို အရင်ဝတ်ရမလား။သူအုပ်ထားတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို အရင်ဖယ်ရမလား ဝေခွဲရ ခက်နေသည်။
` ဟာ...ရှုပ်ပါတယ်...´ ဘုရားရေ။ အောင် က မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို ဖယ်လိုက်သည်။ ဘာဆိုဘာမှမရှိတော့တဲ့ အောင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူ အသက်ရှုရပ်လောက်တဲ့အထိကြည့်မိသည်။ ရေချိုးပြီးပြီးချင်းမို့ ရေစက်တချို့တင်နေသည့် လမွေးအုံလေးမှာ မီးရောင်အောက်တွင် တလက်လက်
နှင့် မည်းပြောင်နေသည်။ ၃ လက်မ သာသာရှိတဲ့ အောင်ရဲ့လိင်တံလေးက ဖောင်းဖောင်းအိအိလေး။ နီညိုရောင်ဒစ်လေးက အရေးပြားထူထူအောက်မှာပြူထွက်နေသည်။ circumcision (လိင်တံအရေပြား ဖြတ်ထားခြင်း) လုပ်ထားသလိုပင်။ တုတ်လေးအောက်မှာ ပျော့အိအိ အိတ်လေးကလည်းတွဲလဲ
ခိုနေသည်။ သူ ဘာကိုပြောရမှန်းမသိ။
` အစ်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားလား...´
` မဖြစ်ပါဘူး... အောင် ရဲ့အိမ်လိုသဘောထားပြီးနေပေါ့´
` အိမ်မှာတော့ဒီလို မနေရဲပါဘူး အစ်ကိုရဲ့... သူငယ်ချင်းအဆောင်မှာတော့ နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အခါ နေတတ်တယ်...ကျွန်တော်က ဒီလိုကိုယ်တုံးလုံးနေရတာကိုကြိုက်တယ်လေ...´ သူ ပြောစရာစကားမရှိတော့။ အောင် က အခုထိပုဆိုးမ၀တ်သေး။ မျက်နှာသုတ်ပုဝါနှင့် ခေါင်း
` အောင်...ပုဆိုးမ၀တ်ချင်တောင်မှ အင်္ကျီဝတ်ထားအုံး...အအေးမိနေအုံးမယ်...´
` အစ်ကိုပဲ ခေါင်းသေချာသုတ်ဆို´ ဒီကောင်လေး ကတ်သပ်နေပြန်သည်။
` အင်္ကျီအရင်ဝတ်...ခေါင်းက နောက်မှသုတ်..´ သူ့နားကိုကပ်လာသည်။
` ခေါင်း ကို အစ်ကိုသုတ်ပေး...ကျွန်တော် အိမ်မှာဆိုခေါင်းလျှော်ပြီးရင်ခေါင်းသုတ်တာမဟုတ်ဘူး...´ အောင် ကတကယ့်ကို ချစ်ဖို့ကောင်းသည်။ သူရင်တွေ ခုန်မြန်လွန်းသည်။ ဒီကောင်လေးနှင့်တူတူနေရလျှင်နှလုံးရောဂါရနိုင်သည်။
` အေးပါ...ပြီးရင်ဒီကိုလာခဲ့´ သူ ကုတင်ပေါ်မှာသွားထိုင်လိုက်သည်။ အောင် က သူ့ဘေးနား မှာဝင်မထိုင်ဘဲ ကုတင်အောက်ခြေသူ့ပေါင်ကြားထဲကိုထိုင်လိုက်သည်။ အောက်ပိုင်းကတော့ အခုထိ ဘာမှ မ၀တ်ထား၊ ရေချိုးပြီးသားမို့လတ်ဆတ်တဲ့ကိုယ်သင်းရနံ့အပြင် ဆပ်ပြာနံ့ကြောင့် သူ နမ်းချင်စိတ်တွေကို ထိန်းထားရသည်။ မျက်နှာသုတ်ပုဝါဖြင့် သေသေချာချာသုတ်ပေးနေမိသည်။ မည်းမှောင်ကောက်ကွေးနေသော
ဆံပင်ကြားထဲတွင် သူ့လက်ချောင်းများဖြင့် ကစားနေမိသည်။
` ကဲ...ရပြီ ညီ´
` လာ...၅၀၀´ အောင်က မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ သူ့ကုတင်က သာမန်ကုတင်ထက်အနည်းငယ်နိမ့်သောကြောင့် အောင်ရဲ့ ညီငယ်နဲ့ သူ့မျက်နှာနှင့် တည့်တည့်ရှိနေသည်။ တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ခုန်နေတဲ့သူ့ရင်ခုန်သံတွေကို အောင် ကြားလောက်သည်။
` မရဘူး... ကတိအတိုင်းပဲ ၅၀၀..´
` အစ်ကိုပေးတဲ့ ၅၀၀ ကိုကျွန်တော် လက်ဖက်ရည်ဝယ်သောက်လိုက်ပြီ ...၂၀၀ ပဲကျန်တော့တယ်´ အောင်က သူပြောသည်ကိုတကယ်အောက်မေ့နေပုံရသည်။
`ဒါဆိုရင်... ၅၀၀ အစားတစ်ခုခုပေး´ အောင် မျက်နှာညှိုးသွားသည်။
` အစ်ကို ဘာလိုချင်လို့လဲ´ အောင်ရဲ့ လိင်တံလေးကို သူ ကြည့်မိသည်။ ခုနမြင်သည်ထက်အနည်းငယ်ကြီးလာသည်ဟု သူထင်သည်။
` အရင်ဆုံး...ပုဆိုးအရင်ဝတ်... အစ်ကို့ရှေ့မှာတန်းလန်းတန်းလန်းနဲ့...အစ်ကို ကိုက်မိလိမ့်မယ်´
` ဟာ...ဗျာ´ အောင် ရှက်သွားသည့်ပုံစံမှာတကယ့်ကို ချစ်ဖို့ကောင်းသည်။ သွားတက်ကလေးက ခပ်ထူထူ နှုတ်ခမ်းကြားကနေ လက်ခနဲထွက်လာသည်။ အောင် ကိုသူ တကယ်ချစ်သွားသည်။ ခုံပေါ်တင်ထားခဲ့တဲ့ပုဆိုးကို သွားယူပြီး ကောက်ဝတ်လိုက်သည်။
` ကဲ...အခု အစ်ကိုလိုချင်တာပြောမယ်..´
` အောင်ကို အစ်ကို ဖက်ထားချင်တယ်´ အောင် မျက်နှာမှာဘာမှ ထူးခြားသွားတဲ့အမူအယာတော့မပေါက်။
` အင်း´ သူ မတ်တပ်ရပ်လိုက်တာနဲ့ အောင် ကသူ့ကိုလာဖက်သည်။ တင်းတင်း ကျပ်ကျပ်ဖက်ထားသည်။ သူ့ရဲ့လည်တိုင်မှာ စွတ်စိုသွားမှ အောင် သူ့ကိုနမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာကို သူသိသွားသည်။
` ဒီကောင်လေးတော့ ငါ့ကို နမ်းတာ ၃ ခါရှိပြီ..´
` အစ်ကိုပဲ ဖက်ချင်တယ်ဆို...အစ်ကိုကို့ကျွန်တော်လည်းဖက်ချင်နေတာ...အစ်ကို့ရေမွှေးနံ့ကိုရရင် ကျွန်တော် မနေနိုင်ဘူးဗျာ´ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ဖြူစင်စွာပြောတဲ့ အောင်ရဲ့စကားတွေက အောင်ကို ပိုချစ် သွားစေသည်။ သူလည်း အောင် လည်တိုင်တွေကိုပြန်နမ်းလိုက်သည်။
` ကလဲ့စားချေတာ...´ အောင် ဘာမှမပြော။ သူ့ကိုပဲတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်ထားသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဖက်ထားတာတော်တော်ကြာသွားသည်။
` အောင်... ´
` အောင် ကို ကိုယ်ချစ်တယ်´ သူ ပြောထွက်သွားသည်ကို သူ့ဖာသာအံ့အားသင့်သွားသည်။
` အောင်လည်းချစ်ပါတယ်´ ဘုရားရေ။ အောင် တကယ်ပြောတာလား။
` တကယ်ပေါ့..အစ်ကို က အောင် အစ်ကိုအရင်းထက်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ အောင် အစ်ကို့ကို အစ်ကိုအရင်းထက်တောင်ချစ်ပါတယ်´
သူ ထင်တော့ထင်ပါသည်။ အောင်ဟာ straight တစ်ယောက်ပဲဖြစ်သည်။ သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကလည်း အစ်ကို တစ်ယောက်လို ချစ်တာမျိုးပဲဖြစ်သည်။ ဖက်ထားတဲ့လက်တွေကို ဖြေချလိုက်သည်။
`ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ´ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ဖြစ်တာကြောင့် တော်သေးသည်။ မနေ့ကမှလျှော်ထားသော ကြောင့် အိပ်ယာခင်းကမွှေးပျံ့နေသည်။
` ...´ အောင် က အထူးအဆန်းတခုလိုကြည့်သည်။ သူ ဆွတ်နေကျရေမွှေးပုလင်းကိုယူကာ သူ့လည်တိုင်တွေကို ထပ်ဆွတ်လိုက်သည်။
` အောင် လာခဲ့ အစ်ကို ရေမွှေးဆွတ်ပေးမယ်..အောင်ကြိုက်တဲ့ အနံ့လေ´
` ကျွန်တော် က ဒီရေမွှေးကို အစ်ကို ဆွတ်ထားတာကိုပဲကြိုက်တာ၊ ကျွန်တော် ရေမွှေးဆွတ်တာကိုတော့ မကြိုက်ဘူး။´ သူအံ့သြသွားသည်။
` အောင် ကအထူးအဆန်းပါလား။ ´
` ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူး။ တခြားသူတစ်ယောက်ယောက် ကရေမွှေးနံ့ ကိုတော့ကြိုက်တယ်... အစ်ကို သုံးတဲ့ရေမွှေးနံ့ကိုတော့ကျွန်တော် အခုချိန်ထိတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ...´
` ၅၀၀...ပေး...´ သူ သတိလွတ်ပြီးပြောထွက်သွားသည်။
` အခု မပေးဘူး၊ မနက်ဖြန်မှပေးမယ် ဟုတ်ပြီလား။´
` မရဘူး။ ၅၀၀ မပေးရင် တခုခုပေး´ ခလေးလေး တစ်ယောက်လို ဆိုးနေပုံမှာ ဖက်နမ်းချင်စရာပင်ကောင်းတော့သည်။
` အောင် ဘာလိုချင်လို့လဲ´
` ကျွန်တော့်ကို ဖက်အိပ်ခွင့်ပေး´ သူ အောင်ကို လုံးဝမယုံတော့။ ဒီကောင်လေးက straight တယောက်ကောဟုတ်ပါသေးရဲ့လား။
သူ့လိုပဲ နေတဲ့လူတစ်ယောက်လား။ ဒါမှမဟုတ် အစ်ကိုတစ်ယောက်လို ခင်တွယ်နေတာလား။
` ကောင်းပြီလေ...၊ ´
` ဒါမှ အစ်ကိုကြီးကွ၊´
`နေအုံး...မီးသွားပိတ်လိုက်အုံးမယ်´ အခန်းမီးကိုပိတ်ပြီးတော့ ညအိပ်မီးလေးကို ထွန်းထား လိုက်သည်။ ညအိပ်မီးအရောင်က အပြာရောင်ဖျော့ဖျော့ဖြစ်သည်။ အောင်က ကုတင်ပေါ်လှဲနေသည်။ သူ အောင့်ကို ချစ်သူတစ်ယောက်လိုချစ်ချင်မိသည်။ one night stand တော့ မဖြစ်စေချင်။
လိင်ဆက်ဆံဖို့အတွက်နဲ့တော့ အောင် လိုလူမျိုးကို သူမရွေးချယ်ချင်တော့။ သူ အောင် ကိုဖြူစင်စွာ နဲ့ချစ် နေချင်တော့သည်။ လူဆိုတာ တစ်ခါတစ်ရံထိုကဲ့သို့ ထူးဆန်းမှုတွေ၊ လျှို့ဝှက်မှုတွေ၊ ဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတတ်သည်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ သူဖတ်ဖူးသည်။ လူဆိုတာ အမြဲလိုလိုအကြောင်းအရာ တခုခုကို တွေးတော စိတ်ကူးနေတတ်ကြသည်တဲ့။ အဲ့ဒီ့အရာတွေထဲမှာ အများဆုံးကတွေးတောကြတာက ငွေ ..နောက် တစ်ခုက လိင်။
သူ ကုတင်ပေါ်တက်တက်ခြင်း ပက်လက်လှန်အိပ်လိုက်သည်။
` ဟိုက်...အိုရာစုမိနာဆိုင် (ကောင်းမွန်စွာအနားယူပါတော့)´
` I don't get it ´
` နန်းဒက်စ်ကာ (ဘာများပါလဲ)
` တော်ပြီကွာ...အောင် ဂျပန်လိုမမှုတ်နဲ့တော့´
` ဟိုက်... ၀ါခတာ (နားလည်ပါပြီ) ´
` လူဆိုးလေး...ဂျပန်လိုတော်တော်တတ်နေတယ်ပေါ့´ အောင် ကအခုထိပက်လက် လှန်အိပ်နေဆဲ။ သူကြည့်လိုက်တော့ မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ထားသည်။
` နဲနဲပါးပါး သင်ဖူးတာပါ အစ်ကို´
` ကောင်းပါတယ်ကွ၊ ဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုတတ်ထားတာက ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိတယ်လေ။ ´
` ဟုတ်တယ်။ ကျွန်တော်က ဂျပန်စကားသင်တာ ဂျပန်မ လေးတွေကိုယူမယ် လို့စိတ်ကူးရှိလို့´ ဒီလိုဆိုတော့လည်း အောင် က straight တစ်ယောက်ရဲ့လေသံနဲ့။
`ဘာလဲ...အောင် က ဂျပန်မှာ အပြာကား တွေသွားရိုက်မလို့လား၊ အောင် body structure နဲ့တော့ဖြစ်တယ်။´
` ကဲ...အိပ်တော့မယ်´ သူ အောင် ဘက်ကို ကျောပေးပြီးအိပ်လိုက်သည်။
` ကျွန်တော် အစ်ကို့ကိုဖက်အိပ်ဖို့လေ´ သူကလည်း အောင် ရဲ့ပွေ့ဖက်မှုကို တောင့်တ နေသူပါ။ အောင် ဘာလို့များအဲ့ဒီလောက်ထိသူ့ကို အလိုက်သိတတ်ရတာလဲ။ သူ မစဉ်းစားချင်တော့။
` ဖက်လေ၊ ရပါတယ်ကွ ´ အောင် သူ့ရင်ဘတ်ကို ဖက်ထားလိုက်သည်။ ဘာရယ်မဟုတ် အောင် ရဲ့လက်တွေကို သူကိုင်ထားလိုက်သည်။ ကြမ်းရှရှ နှင့်။ သူ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်။
` အစ်ကို သာ ကျွန်တော့် အစ်ကိုရင်း ဖြစ်ရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ...ကျွန်တော့်အစ်ကိုရင်းက ကျွန်တော့်ဆို သိပ်နှိမ်တာပဲ´
` အစ်ကိုက ဘွဲ့ရပြီးသားလေ၊ company တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်။ လခကတော့ ကျွန်တော့်ထက်ကောင်းတာပေါ့၊ ကျွန်တော်က ၁၀ တန်းပဲအောင်တာ၊ တက္ကသိုလ်ကို ကျွန်တော် မတတ် ချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ၁၀ တန်းအောင်ပြီးပြီးချင်းမှာ ကျွန်တော့်အဖေက ဦးနှောက် သွေးကြောပြတ်ပြီးဆုံးတယ်လေ၊ အစ်ကိုကလည်း သိပ်မကြာဘူး မိန်းမခိုးပြေးတယ်။ ပြီးတော့ သူ့မိန်းမလည်း တခါတည်း ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလိုက်လာတာပဲလေ။ အစ်ကိုရဲ့ ၀င်ငွေတစ်ခုတည်းနဲ့ ဘယ်လိုမှရပ်တည်လို့ မရတဲ့ အဆုံး ကျွန်တော် အခုလို ကုန်ထမ်းတဲ့ဘ၀ကိုရောက်သွားတာပဲ၊ အဲဒါကိုပဲ အစ်ကို က ကျွန်တော် ကအသုံးမကျလို့ဆိုပြီးပဲ အပြစ်တင်နေတယ်။ သူရတဲ့လခ ကသူ့မိန်းမ မိတ်ကပ်ဖိုးနဲ့တင်ကုန်နေပါ
ပြီ အစ်ကိုရာ၊ ဒါကြောင့် တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော် မိန်းမတောင် ယူဖို့ကြောက်လာတယ်။´ သူကတော့ ၁၀တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ် ကိုအပူအပင်မရှိတတ်နိုင်တာကို ပင် ဆက်မတတ်ချင်။ အောင် ကအခုမှ အသက်ငယ်ငယ်ပဲရှိသေးသည်။ ပညာသင်တဲ့အရွယ်မှာ အခုလိုပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်တွေကို လုပ်နေရသည်။
` မကြောက်ပါနဲ့ အောင်ရဲ့။ အောင် အခု အစ်ကို အသစ်တစ်ယောက်ရှိနေပြီပဲ။ ဒီနေ့ကစပြီး ဟောဒီက ရဲသစ် က ဟောဒီကအောင် ရဲ့ အစ်ကို ဖြစ်သွားပြီ။ အောင် ကော သဘောတူတယ်မလား´ အောင် လက်တွေက ဒီ့ထက်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်လိုက်သည်။
` တကယ်ပြောတာလား အစ်ကို´
` တကယ်ပေါ့ အောင်ရဲ့။ အောင် ဟာ ကိုယ့်ညီအရင်းထက်တောင် ငယ်သေးတာ၊ ညီတစ်ယောက်ရလို့ အစ်ကိုက အောင် ကိုတောင်ကျေးဇူးတင်ရအုံးမယ်´
` ကျွန်တော်က ကျေးဇူးတင်ရမှာပါအစ်ကို´
` ကဲ..အိပ်တော့ မနက်ဖြန်မထနိုင်ဘဲနေအုံးမယ်´
` Good night brother'
'OK...good night' သူ့ရဲ့ ထကြွနေတဲ့ လိင်စိတ်တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်မှန်းမသိတော့။ အောင် ကိုသူ ချစ်သူတစ်ယောက်လို၊တကယ့်ကိုညီ တစ်ယောက်လို ချစ်မိသွားသည်။ အခု သူ့ကို ဖက်ထားတဲ့ အောင် လက်တွေကို ကိုင်ထားရင်း သူ ကြည်နူးမိသည်။ “အောင်.....ကိုယ် ညီ့ ကို တကယ်ချစ်မိသွားပြီ။”
သူကြည့်လိုက်တော့ အောင် က အင်္ကျီဗလာ။ ပုဆိုးကလည်းတိုတိုဝတ်ထားသည်။ အတော့်ကို အိပ်မောကျနေပုံရသည်။ပေါင်ရင်းနားကနေ လိပ်တက်နေသော ပုဆိုးရဲ့ အပေါ် မှာ ထိုးထိုး ထောင်ထောင်ထွက်နေသော အောင် လိင်တံကို တွေ့ရသည်။ အရှည်ကြီးတော့ဖြစ်ပုံမပေါ်။ သူလက်တွေက ပုဆိုးအောက်နားကနေ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲလှန်လိုက်သည်။ ပေါင်ပေါ်ကိုလိပ်တက်သွားသော ပုဆိုးစသည်
အောင် ၏ လိင်တံနှင့် ငြိနေသည်။ ထပ်တခါ လှန်လိုက်တော့မှပဲ ဒစ်ကလေးပြူထွက်နေသော အောင် ၏ ဖွားဖက်တော်လေးကို တွေ့လိုက်ရသည်။ သူ ရင်တွေခုန်မြန်နေသည်။ ရေတွေငတ်လာသည်။ အောင် ရဲ့ညီဖွားက မရှည်။ ၅လက်မခွဲလောက်သာသာရှိမည်။ သာမာန်လောက်သာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် လုံးပတ်က တော်တော် တုတ်သည်။ သူ လန့်ဖြန့်သွားသည်။ သူ့ လက်မ နှင့်လက်ညှိုး ထိပ်နှစ်ခု ထိရုံပဲထိလောက်
သည်။ ခပ်ထူထူရှိတဲ့ လိင်တံ အရေပြားအောက်တွင် နီညိုရောင်သန်းနေသော ဒစ်ကလေးက စုပ်ချင်စရာ ကောင်းသည်။ သူ ဖြည်းဖြည်းလေးချင်းထိလိုက်သည်။ အောင် က ဘာမှသိပုံမပေါ်။ ညာဖက်လက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ နွေးနေသော အောင် လိင်တံရဲ့ သွေးကြောတွေက တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေသည်။ ဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘဲ သူ့နှုတ်ခမ်းများက လိင်တံလေးကို မထိတထိတို့လိုက်သည်။ မသိမသာ လှုပ်သွားသောကြောင့် သူ ဒီတိုင်းနေလိုက်သည်။ တအောင့်လောက်ကြာတော့မှ လိင်တံတချောင်းလုံးကို သူ့ပါးစပ်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ အားပါး....
သူ့ပါးစပ်ထဲပြည့်ကျပ်သွားသည်။ ခပ်မျှင်းမျှင်းလေးစုပ်ပေးနေလိုက်သည်။ ဒစ်ဖျားအောက်လေးကို လျှာဖျားဖြင့် စုပ်သက်လိုက်ချိန်တွင် အောင်သိသိသာသာ လှုပ်ရှားသွားသည်။ အောင် အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား။ မသိ။ ရေခဲချောင်းကို စုပ်သလို အငမ်းမရ သူ စုပ်နေမိလိုက်သည်။
သူ့ဆံပင်တွေကို တစုံတခုက ထိလာမှ သူမော့ကြည့်လိုက်သည်။
` အား...ကောင်းလိုက်တာ အစ်ကို...´ သူ ပြန်ပြောမည်အလုပ် အောင်က သူ့ခေါင်းကို လက်နှင့်ဖိချလိုက်သည်။ သူ အလိုက်သင့်စွာ ပါးစပ်ထဲပြန်ထည့်ထားပေးလိုက်သည်။
` အား...ရှီး.....ဂွတ်လိုက်တာ´ အောင် လက်တွေက သူ့ဆံပင်ထဲထိုးဖွနေသည်။ တော်တော်ကြာကြာ သူစုပ်ပေးနေလိုက်သည်။
သူ အရှိန်ပြင်းပြင်း အားပါပါ စုပ်ချလိုက်တော့အောင် ရဲ့
` အား..........ရှစ်...........´ အသံတွေနဲ့အတူ ပျစ်ချွဲချွဲ ဖြူဖွေးဖွေး သုတ်ရည်တွေက သူ့ပါးစပ်ထဲပြည့်လျှံသွားသည်။
သူ့နှုတ်ခမ်းစက်ကနေ လျှံကျလာသော သုတ်ရည်တချို့ အောင်ရဲ့ ဆီးစပ်ပေါ်ကိုကျသွားသည်။
` အစ်ကို...ဆောရီး....ကျွန်တော်....မထိန်းနိုင်...´ သူ ပါးစပ်ထဲက သုတ်ရည်တွေကြောင့်ချက်ချင်းပြန်မပြောနိုင်။ ညှီစို့စို့အနံ့တွေကြောင့် သူ ပျို့တက်လာသည်။ ဆက်မပြောနဲ့တော့ ဆိုတဲ့အမူအယာကို သူလုပ်ပြလိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားလိုက်သည်။
သူရေချိုးခန်းထဲပြန်ထွက်လာတော့ အောင်က ကိုယ်လုံးတီးနဲ့။ အောင် က သူ့ကိုလက်လှမ်းပြပြီးခေါ်နေသည်။ သူ ကုတင်ပေါ်တက်သွားတော့အောင် က သူ့ကိုလှမ်းဖက်လိုက်သည်။
` အစ်ကို့ကို ကျွန်တော် ချစ်တယ်´ သူ့လည်တိုင်တွေကို အားရပါးရနမ်းသည်။ သူ့ စိတ်တွေပြန်ကြွလာသည်။ သူ အောင်ရဲ့ခေါင်းတွေကို လက်တွေနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီး အောင် နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းပစ်လိုက်သည်။ အောင်က အလိုက်သင့် ပြန်နမ်းသည်။ အောင်က
` အစ်ကို... ခုနကလိုမျိုး...နောက်တစ်ခေါက်လောက်´ သူ ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်သည်။ အောင်ရဲ့ လည်ပင်းတွေဆီ အနမ်းမိုးတွေရွာချလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ပြည့်တင်းနေတဲ့ ကြွက်သားတွေပေါ်က အညိုရောင် နို့သီးခေါင်းလေး ဆီ။
`အား...ဟူး...........ရှစ်..´ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့လျှာဖျားလေးက ကွေးကွေးကောက်ကောက် မညီမညာပေါက်နေတဲ့ အောင်ရဲ့ဝမ်းဗိုက်မွေးတွေက နေ ဆီးစပ် ဆီသို့။ မပျော့တပျော့ အောင် လိင်တံလေးကို ပါးစပ်ထဲတွင်ငုံထားလိုက်သည်။ ခုနက ထွက်ထားသော cum တွေရဲ့ငံကျိကျိအရသာကို သူရသည်။ သူ့ပါးစပ်ထဲတွင်အောင် လိင်တံက တဖြည်းဖြည်းထွားလာသည်။ အောင် ပက်လက်လှန်အိပ်ချလိုက်သည်။
မားမားမတ်မတ်ထောင်နေသော အောင် ရဲ့တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်လီးကြီးမှာ အကြောတွေ ယှက်ဖြာနေသည်။ မာန်ဖီနေသော မြွေတစ်ကောင်လို၊ သူ ဒစ်ဖျားကို နှုတ်ခမ်းကို တင်းတင်းစေ့ကာ အားနဲ့စုပ်ယူလိုက်သည်။
`......´ အောင် က သူ့ခေါင်းကို ဆွဲမော့လိုက်သည်။ စိုစွတ်သော ထူထဲသော အောင် နှုတ်ခမ်းများကို သူ အငမ်းမရ နမ်းရှုတ်လိုက်သည်။ တချက်တချက် ထိုးထည့်လိုက်သော အောင် ရဲ့လျှာကို သူအာသာငမ်းငမ်း စုပ်သပ်လိုက်သည်။ သူ့ ခါးတွေကို ကိုင်ပြီး ရုတ်တရက် သူ့ကို လှဲချလိုက်သည်။ အောင် သူ့ကို ပြန်ပြုစုပေးမလို့လား။ သူထင်တာနှင့်လွဲသွားသည်။
` အစ်ကို မှောက်ပေးပါလား´
` အောင် ...လုပ်မလို့လား၊´
` ဟုတ်တယ်လေ...ကျွန်တော် မနေနိုင်တော့ဘူး၊´
` ဟို... အစ်ကို က...ဒါ...´
` မဟုတ်ပါဘူး... ပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး...ဟို...ကွန်ဒုံး´ အောင် က ခပ်ညစ်ညစ်ရီလိုက်သည်။
` မလိုဘူး၊ ဒီတိုင်းပဲကောင်းတယ်...´ အောင် ကပြောစကားနားမထောင်ဘူးပဲ။
` မရဘူး...။ ညစ်ပတ်လိမ့်မယ်..၊နောက်...အိစ် ...´
` ညစ်ပတ်ရင်ဆေးလို့ရတာပဲ... ဒီတိုင်းကပိုကောင်းတယ်´ သူ့ပေါ်မှာခွထိုင်နေသော အောင် ကို လှည့်လှည့်ပြီးပြောနေရသည်။
` ကို့ မှာ အိစ်ရှိရင် အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ´ အောင် တချက်တွေသွားသည်။
` အံဆွဲထဲမှာ...´ အနံ့စုံ၊ တံဆိပ်စုံ အရောင်စုံ ကွန်ဒုံးများကို အောင် ရွေးရခက်ပေလိမ့်မည်။
` အစ်ကို ဘာအနံ့ကြိုက်လဲ´
` စတော်ဘယ်ရီ´ အခုအချိန်မှာ အနံ့ကအရေးကြီးလို့လား။
` ကောင်းပြီ...နေအုံး... ရော့..´ သူ့မျက်နှာနားကို အောင် ကပ်လာသည်။ ကွန်ဒုံးကို သူ့ကို စွပ်ခိုင်းသည်။ သူ အသာတကြည်ပဲစွတ်ပေးလိုက်သည်။ လုံးပတ်တုတ်သော အောင်ရဲ့ လီးနဲ့ ကွန်ဒုံးက ကျပ်သိပ်နေသည်။ အပေါ်ကနေ အောင် တက်ခွလိုက်တော့ သူ ရင်တွေတုန်နေသည်။ ဒစ်ဖျားကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းထိုးထည့်လိုက်သည်။
` ကျွန်တော် ဖြည်းဖြည်းလေးလုပ်တာကို...´
` အောင် ဟာက တုတ်တယ်...´
` ဟုတ်တယ်လေ..။ သူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်တော့်ကို တုတ်ကြီးတဲ့´
` မဟုတ်ပါဘူး။ သဘာဝအတိုင်းပါပဲဗျာ´ ထပ်ပြီးထိုးထည့်လိုက်တော့ သူ့ စအို အတွင်းမှာ ပြည့်ကျပ်သွားသည်။ ရင်ထဲမှာလည်းပြည့်ဝတဲ့အရသာကို ခံစားလိုက်ရသည်။ တချက်ထိုးလိုက်တိုင်း prostate gland ကိုထိမိသည်။ အောင် ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်အချက်ပေါင်းများစွာလုပ်နေသည်။ သူ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ဖီးလ်ယူနေလိုက်သည်။
`အား...´ အောင် ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းလှသည်။ အခု က အကုန်လုံးပြန်ဆွဲ ထုတ်လိုက်သည်။ လီးတစ်ချောင်းလုံးအကုန်အပြင်ရောက်သွားပြီဆိုမှ အ၀တွင်တေ့ပြီး အားနဲ့ ပြန်ဆောင့်လိုက်သည်။ တကိုယ်လုံးပူထူသွားသည်။
` Fuck...ကျပ်ကျပ်လေးနဲ့ကောင်းလိုက်တာအစ်ကိုရာ..ဒါတောင် First time မဟုတ်လို့´
` မပြီးနဲ့အုံးလေ...ကျွန်တော် မပြီးသေးဘူး။´
` မရတော့ဘူး........အား...........´ သူ့လိင်တံကို အသာအယာ ထိလိုက်ရုံနဲ့ သူ့ သုတ်ရည်တွေ ဒလဟော ပန်းထွက်သွားသည်။
အောင် သူ့ပုခုံးတွေကိုကိုင်ပြီးထပ်ဆောင့်နေသည်။ အားနဲ့ဆောင့်နေသေးသည်။
သူ လှုပ်နေသည်။ တလှုပ်လှုပ်နှင့်လှုပ်နေသည်။ ပုခုံးတွေကို ကိုင်လှုပ်နေသည်။
` အစ်ကို...မထသေးဘူးလား...အစ်ကို.....ထတော့လေ´ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို တစုံတယောက်ကလှုပ်နှိုးလိုက်သည်။ အသံသာ ကြားနေပေမယ့် မျက်လုံးမဖွင့်ချင်သေး။
` အိပ်ပုတ်ကြီးနေတယ်...ထတော့လေ´ သူ ဘယ်ရောက်နေတာလဲ။ သူ့အခန်းထဲမှာဘယ်သူရောက်နေတာလဲ။ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့
` အောင်... ´ သူ ညက အောင်နဲ့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ ကပ်စီးစီးဖြစ်နေတဲ့ သူ့ပေါင်ကြားကို လက်နဲ့စမ်းမိသွားသည်။
` ၇ နာရီတောင် ကျော်ပြီ၊ ကျွန်တော် ဆို ၆ နာရီလောက်ကတည်းက နိုးနေတာ...´ သူ ပြန်စဉ်းစားသည်။ သူ အိပ်ရင်းနဲ့ သုတ်လွတ်သွားတာပဲဖြစ်မည်။ သူ အိပ်မက်မက်ခဲ့တာပဲ။ Wet dream ကို သူမမက်တာကြာပြီပဲ။
` အစ်ကို သေးပေါက်ချတာလား....အဲ.......ဒါမှမဟုတ်....´ ခွေးကောင်လေး၊ သူ့ပုဆိုးက သုတ်ရည်အကွက်ကို မြင်ဖြစ်အောင်မြင်သွားသေးသည်။
` မယုံဘူး ....အဲ....အစ်ကို...ဟို....´
` တော်ပြီ..အစ်ကို ရေသွားချိုးတော့မယ်´ အောင် ပြုံးစိစိလုပ်နေသည်။
` ငါ့ အစ်ကိုကြီး ရှက်သွားပြီ...။ ´ သူရေချိုးခန်းထဲကို အမြန်ဝင်လိုက်သည်။ နို့မဟုတ်ရင် အောင် ပြောတာကိုခံနေရအုံးမည်။
ရေပန်းအောက်ထဲဝင်လိုက်ပြီး ရင်ထဲက အမော တွေကိုပါ ဆေးကြောပစ်လိုက်သည်။ အိပ်မက်ထဲ ကအကြောင်းအရာကို စဉ်းစားရင်း သူ့ ညီဘွားခေါင်းထောင်လာသည်။ သေသေချာချာဆေးပစ်လိုက်သည်။ လုံးဝန်းပြီး ကျစ်လစ်နေသော သူ့ဖင်ကြားထဲကို ပွတ်သပ်မိသည်။ ဟုတ်သည်။ သူအိပ်မက်ထဲမှာ မက်သည့်အတိုင်း first time မဟုတ်။ ပထမ ဆုံး သူ.....။ သူ ဆက်မတွေးချင်တော့။ လုံးဝ ဆက်မတွေးချင်တော့။
` အစ်ကို ... မပြီးသေးဘူးလား... တော်ကြာ အအေးမိအုံးမယ်။´
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သိတာ 48 နာရီပင်မရှိသေး။ အောင်က သူ့အပေါ်အစ်ကို ရင်းကဲ့သို့ ပြုမူနေသည်။ ထိုအရာပေါ်မှာ သူ သာယာသင့်သလား။ မတွေးတတ်။
` အေး...ပြီးပြီ ကွ..´
` အစ်ကို မနေ့က ကျွန်တော့် အင်္ကျီတွေကော...´ သူ ရေချိုးခန်းတံခါးဖွင့်လိုက်တော့ အောင် က
` Wow... ငါ့အစ်ကိုကြီး က လည်း နဲနဲနောနောကြီးမဟုတ်ဘူး။´ သူ ယောင်ယောင်မှားမှား အောက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။ပုဆိုးပိုင်းဖြင့်ပတ်ထားသည်မှာလုံလုံခြုံခြုံပဲ။
` Body structure ကိုပြောတာပါ အစ်ကိုရ.´
` လာမြှောက်မနေနဲ့ ... ဒီလောက်ပုံပျက်နေတဲ့ body ကို´
` အစ်ကို နဲနဲလောက်ပြန်ဆော့လိုက်ရင် ဂျိန်းစဘွန်းတောင်ရှုံးသွားအုံးမယ်´
` အစ်ကို...ကျွန်တော့် အင်္ကျီတွေကော´
` ဟိုက်... ညက အ၀တ်လျှော်စက်ထဲထည့်ပြီး လှန်းဖို့မေ့သွားတယ်.. .ရတယ်... အစ်ကို့အင်္ကျီယူဝတ်´
` မ၀တ်ပါဘူးဗျာ...တော်ကြာ အင်္ကျီအကောင်းတွေဝတ်ပြီး အကျင့်ပါသွားအုံးမယ်´ အောင် က တကယ့်ကိုရိုးသားသည်။ သူ့ဆံပင်တွေကို ဖွလိုက်သည်။
`ဒါဆိုလည်း ခဏယူဝတ်ထား...အလုပ်သွားခါနီး အစ်ကို အောင် အတွက် အင်္ကျီလိုက်ဝယ် ပေးမယ်။´ ဗီဒိုထဲက အဖြူရောင်တီရှပ်ကို ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ ပုဆိုးကတော့ အပြာရောင်ရင့်ရင့်။ အောင် နှင့်လိုက်မည်ဟုသူထင်သည်။
` ကျွန်တော်လည်း အင်္ကျီဝယ်ချင်နေတာ။ လခထုတ် ရင် ကျွန်တော့်လခ ထဲကဖြတ် လိုက်ပေါ့´ မာနခဲလေးပဲ။ သူ ကပဲအလျှော့ပေးရမဲ့ပုံများသည်။
` မဖြတ်ဘူး အောင် ရ။ အစ်ကိုတို့ဆီမှာ အလုပ်စ၀င်တဲ့လူကို ဒီလိုပဲ အင်္ကျီတစ်စုံဝယ်ပေးနေကျ။ အားမနာနဲ့...´
` အစ်ကိုက ညီ့ကို လိမ်ရမှာလား...အောင် ရေမချိုးတော့ဘူးလား´
` ဟာ ဗျာ... ကပ်မှာပဲ....´ အင်္ကျီဗလာနဲ့ အောက် ကသူ့ကို အတင်းလာဖက်သည်။ အောင် က ခလေးစိတ်မကုန်သေးတဲ့လူကြီးလေးဖြစ်နေသည်။ သူမရုန်းဘဲ ပေးဖက်ထားလိုက်သည်။ သူ့ အနောက်က နေသိုင်းဖက်ထားသည်။ ရေချိုးပြီးစ သူ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာအောင် ရင်ခွင်ထဲတွင် နွေးထွေးသွားသည်။
ထုံးစံအတိုင်း ဘာဘူ ကနောက်ကျသည်။ ဘာဘူ ဆိုပေမယ့် အသားမည်းနက်သော ပိန်ခြောက်ခြောက် အိန္ဒိယလူမျိုးမဟုတ်။ အဖေက အိန္ဒိယ နှင့် အမေက ကရင် ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဘာဘူ ၏ အသားရောင်မှာ သာမန် မည်းခြင်းဖြစ်သည်။
မည်းနက်နေသော မျက်ခုံးမွေးများနှင့် ဖြောင့်စင်းပြီးချွန်နေသော နှာတံတို့ကို ဘာဘူပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ဘာဘူ သာ အသားဖြူမည်ဆိုရင် ကိုရီးယား မင်းသားတွေ လောက်တော့သနားသည်။ ၆ပေ လောက်ရှိသည့်အရပ် အမောင်းကလည်း အားကျစရာကောင်းသည်။
စူဖြိုးနေသောရင်အုပ်ကားကား၊ မည်းနက်ကောက်ကွေးနေသော ရင်ဘတ်မွေးများ။ ဒါတွေအားလုံးပေါင်း လိုက်ရင် ဘာဘူ က ဂေးလ်တွေရဲ့အကြိုက်ဖြစ်သည်။ အသက်က တော့ သူ့ထက် ၃ နှစ်ငယ်သည်။ မနက်ဖြန်ဆိုလျှင် ဘာဘူမွေးနေ့ပင်။ အလုပ်သမားတွေကိုသူငယ်ချင်းလို သဘောထားသောကြောင့် ဘာဘူ နှင့် ဖေမောင် တို့မှာ သူ့ကို အလုပ်ရှင်လိုတစ်မျိုး သူငယ်ချင်းလိုသဖွယ် ဆက်ဆံကြသည်။ ဖေမောင် က သူ့တို့တွေအားလုံးထက်ကြီးသည်။ ၄၀ ပြည့်ခါနီးဆိုပေမယ့် အလုပ်တော်တော်လုပ်နိုင်သည်။ ထမင်းတခါ
စားလျှင်လည်း နဲနဲနောနောမဟုတ်။ အရပ်အမောင်းက သူနဲ့တူတူပင်။ ဒီတစ်ခါ ခလေးမွေးတာ ၄ ယောက်မြောက်၊ ဖေမောင် ကအသက် ၂၀ ကျော်မှာ အိမ်ထောင်ကျသည်။ ဖေမောင် က လိင်စိတ်ပိုကြွသည်။ ဖေမောင် က တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် ကောင်မလေးတွေ ဖြတ်လျှောက်သွားရင် ပါးစပ်က အငြိမ်မနေသလို လက်ကလည်းအငြိမ်မနေ။ ဘာဘူ ဘေးနားမှာရှိလျှင် ဘာဘူ့ဖင်တွေကို ကိုင်လိုက်၊ နှိုက်လိုက်လုပ်တတ်သည်။ သူ့ကိုတော့ အလုပ်ရှင်ဖြစ်လို့ ဟိုကိုင်ဒီကိုင်တော့ မလုပ်။ ဖေမောင်နှင့်ဘာဘူက သူအဖေဆီက လက်လွဲ ယူကတည်းက ရှိနေတဲ့အလုပ်သမားတွေဖြစ်သည်။ ဖေမောင်ကတော့ လုပ်သက်ပိုများသည်။
အလုပ်သမားခြင်းအတူတူ သူက အောင် ကို ပိုပြီး ခင်သည်။ ချစ်သည်။ လိင်စိတ်နဲ့တော့ မချစ်ချင်။ ဖြူစင်စွာချစ်ချင်သည်။
` ကိုမောင်... ကလေး ကောလူကြီးကော နေကောင်းလား´ တံခါးဝတွင်စောင့်နေသော ဖေမောင် ကိုသူ မြင်လျှင်မြင်ချင်းမေးလိုက်သည်။ ဖေမောင် ကချက်ချင်းမဖြေသေး။ မျက်နှာကတော့လုံးဝမကောင်း။ သူ့ဆီက ခါတိုင်းလိုလခ ကြိုထုတ်ဖို့ပြောချင်နေတာပဲဖြစ်မည်။ မီးဖွားတဲ့စရိတ်ကို ဖေမောင် မတောင်းလည်း ပေးမည်ဟု သူအစောကြီးထဲကတွေးထားသည်။
`ကိုရဲ...ကျွန်တော့်........မိန်းမ....´ စကားတောင် မဆုံးသေး၊ မျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ကျကာကိုမောင်အသံတွေတုန်နေသည်။ အောင် ကဘာမှ ၀င်မမေးဘဲ သူ့လက်တွေကို လာကိုင်ထားသည်။
` ကိုမောင် မိန်းမ ဘာဖြစ်လို့လဲ´ ကျွန်တော် သူပြောမည့်စကားကို နားမထောင်ရဲ။
` မွေးမွေးပြီးချင်း ဆုံးသွားပြီ´ သူ စိတ်ထဲတွင်လုံးဝမကောင်း၊ သူ ပါငိုချင်လာသည်။
` ဟာ.........´ အောင်က
`ကိုဖေမောင်...ကလေး ကော´ သူ ထပ်မမေးရဲသည့်မေးခွန်းကိုအောင်က သူ့အစားဝင်မေးလိုက်သည်။
` ကလေး ကကောင်းတယ်၊ မွေးပြီးမှ ဆုံးသွားတာ၊ သား လိုချင်လွန်းတဲ့သူက သားလေးမွေးတာပဲသိသွားရှာတယ်...´ ဖေမောင်က မျက်နှာကို အုပ်ပြီး အသံတိတ်ငိုနေသည်။ သမီးသုံး ယောက်ရှိသော ကိုမောင့် မိန်းမ က သားယောကျာ်းလေးလိုချင်သည်မှာ ကိုမောင်ပြောပြ လို့သူသိထားသည်။ အခုက သားလေးတဲ့။ သူ ကိုမောင် ကိုဘယ်လိုနှစ်သိမ့်ပေးရမလဲ။ တံခါးကို အမြန်ဖွင့်လိုက်ပြီး ကိုမောင့် ကိုအထဲဝင်ခိုင်းလိုက်သည်။
သူတို့ ဒီနေ့ကျ ကိုမောင် အိမ်ကိုသွားကြသည်။ သူရယ် ဘာဘူရယ်၊ အောင် ကတော့ မနေ့က အိမ်ပြန်မအိပ်တဲ့အတွက် အောင် ကို ပြန်ခိုင်းလိုက်သည်။ ကိုမောင့်သမီး အကြီး မှာ အပျိုဖားဖားကိုဖြစ်နေပြီ။ အသားက ညိုညက်ညက်လေးနှင့်။ မည်းနက် ပြီးဝိုင်းစက်နေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေက ငိုထားတဲ့အရှိန်ကြောင့်သာ အနည်းငယ် ညှိုးနေပုံရသည်။
နို့မဟုတ်ရင်အင်မတန်မှ တောက်ပလွန်းသော ညှို့မျက်ဝန်းပိုင်ရှင်လေးဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ထိုအလှတွေက သူ နှင့်မဆိုင်။ ကောင်မလေးကသူ့ကို ခပ်စိမ်း စိမ်းစိုက်ကြည့်သည်။ အခုအငယ်ဆုံးလေးကို ကိုမောင် ယောက္ခမကြီးက ခေါ်ထားလို့တော်သေးသည်။ ကိုမောင် ကိုကူငွေများပေးလိုက်သည်။ ကိုမောင် က သူ့လက်တွေတင်းတင်းဆုပ်ရင်း
` ကိုရဲ ရဲ့ကျေးဇူးတွေကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုပြန်ဆပ်ရမှန်းတောင်မသိ တော့ပါဘူးဗျာ´
` ဒါတွေကို ဘာမှမတွေးပါနဲ့ကိုမောင်...ကျွန်တော် ကူညီနိုင်တာနဲ့ပဲကူညီရတာပါ´ တင်းတင်းဆုပ်ထားသောကိုမောင့်လက်တွေက တုန်ယင်နေသည်။ ဒီနေ့တော့ ကိုမောင် သောက်ရသေး ပုံမပေါ်။
`ကျွန်တော် ပြန်တော့မလို့... ´
` ကိုရဲ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်ပါ့မလား..၊ မိုးလည်းချုပ်နေပြီ...နေအုံး...´
` ဘာဘူ... ကိုရဲနဲ့အိမ်ပြန်လိုက်သွား...´
` မိုးချုပ်နေပြီလေ...နောက်ပြီး ဒီကနေ ၁နာရီကျော်လောက်မောင်းရအုံးမှာ...ဘာဘူ ကမမောင်းတတ်ပေမယ့်အဖော်ရတာပေါ့...´
` ကျွန်တော့်ကို လိုက်ပို့ရင် ဘာဘူအိမ်ပြန်နောက်ကျမှာပေါ့´
` ကိုရဲ ကအဆင်ပြေရင်...ကိုရဲအိမ်မှာပဲတညအိပ်ခိုင်းလိုက်ပေါ့´ ကိုမောင် က တကယ့်ကို ဘဘောရိုးနဲ့ပြောမှန်းတော့သူသိသည်။ ဘာဘူ...သူနဲ့တူတူ ညအိပ်လို့ဖြစ်ပါ့မလား။ ဘာဘူနဲ့သူ...၊ သူတွေးရင်းနှင့်ပင် ရင်ခုန်မြန်သွားသည်။
ဘာဘူက အရင်ကအကြောင်းတွေကို အစဖော်မှာကိုသူကြောက်နေမိသည်။ မဖြစ်ပါဘူး။ သူနဲ့လိုက်အိပ်လို့မဖြစ်ပါဘူး။
` ရတယ် ကိုမောင်..နေပါစေ၊ ကျွန်တော့်ဖာသာပြန်လိုက်ပါ့မယ်´
` ဆရာက ကျွန်တော့်ကို မခေါ်ချင်လို့လား´ ဘယ်ကနေဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဘာဘူ အနားရောက်နေမှန်းမသိ၊
` မဟုတ်ပါဘူးကွ..၊ ငါ့အတွက်အလုပ်ပိုဖြစ်မှာဆိုးလို့ပါ´
` လိုက်ပို့ပြီး ကျွန်တော် ပြန်မှာပါ..´ သူထပ်ငြင်းနေလျှင်..သူ့အမှားဖြစ်သွားမည်။ သူ ခေါင်းညိတ်လိုက်သည်။
ဘာဘူ အိမ်နှင့် ဖေမောင် အိမ်က ၂ မှတ်တိုင်ကျော်ကျော်လောက်ပဲဝေးသည်။ သူ့ဘေးနားတွင် ဘာဘူ လာထိုင်တော့ ခေါင်းလိမ်ဆီနံ့လိုလို ဆပ်ပြာနံ့လိုလို ရလိုက်သည်။ ခါတိုင်းလို ကိုယ်နံ့ပြင်းပြင်းကို မရှုရသဖြင့် ဘာဘူကိုကျေးဇူးတင်မိသည်။ ခုနက ဘာဘူပျောက်သွားသည်မှာ အိမ်ပြန်ပြီးရေမိုးချိုးခဲ့ပုံရသည်။ နှစ်ယောက်ကြားကတိတ်ဆိတ်မှုကို လေးဖြူ ၏ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် သီချင်းက ဖြိုခွင်းလိုက်သည်။
` လေးဖြူက အသံက အရမ်းကောင်းတယ်...ဆရာကြိုက်လား´ ကြိုက်လွန်းလို့ ဖွင့်ထားတာကို ကြိုက်လားဆိုတော့၊ သူ ဘယ်လိုလူစားမျိုးဆိုတာကိုတော့ အကဲခတ်တတ်ပြီး သူဘာကြိုက် တယ်ဆိုတာကို မေးရလောက်အောင် ဘာဘူက ထုံလွန်းထိုင်းလွန်းနေသူတော့ဟုတ်ပုံမပေါ်။ စကားမရှိစကားရှာတယ်ဆိုတာ ပဲဖြစ်မည်။
` အင်း´ သူစိတ်ထဲတွင် ဘာဘူ မေးမည့်မေးခွန်းတွေကိုကြောက်လန့်နေမိသည်။ အခုလိုမျိုး ညမိုးချုပ်တဲ့အထိ ဘာဘူနှင့်အတူ အိမ်ပြန်လာဖူးသည်။ ပြန်လာသည်ကတော့ taxi နဲ့။ သူသိပ်ချစ်ရတဲ့ မင်းအောင် မိန်းမယူတဲ့နေ့မှာ သူအရက်တွေအလွန်သောက်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲသွားဖို့သူ့မှာ သတ္တိမရှိပါ။ ဒါကြောင့်လည်း... ဘာဘူကို အဖော်ခေါ်ပြီး သွားသောက်ဖြစ်သည်။ သူ အဲ့ဒီညက ဘာဘူနဲ့ သူ...၊အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင် သူက ဘာဘူကို သူ့ဖက်ပါအောင် ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ သူအဲ့ဒီည က အရမ်းကို သွေးဆိုးခဲ့သည်။ တွေးကြည့်ရင်းနှင့်ပင် သူ့ညီဖွားထောင်လာသလို မျက်နှာတခုလုံး အနီရောင်လွှမ်းသွားသည်။ ဘာဘူ ကသူ့ကို လိုက်လျောခဲ့သည်။ သာမန်လိုက်လျောမှုမျိုးထက်ပိုခဲ့သည်။ အဲ့ဒီညက သူ့ရဲ့ first time ဆိုလည်းဟုတ်သည်။ ဘာဘူ၏ ၇ လက်မကျော် လောက်ရှိသည့် တုတ်ခိုင်ခိုင်လီး ကြီးက သူ့ရဲ့ အသစ်စက်စက် ချယ်ရီအပေါက်လေးကို မညှာမတာထိုးသွင်းခဲ့သည်။ မွှန်ထူနေသော သူ နောက်နေ့မနက်မှာ လမ်းတောင်ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်။
` ဆရာ နေမကောင်းလို့လား´
` မသိပါဘူး။ ဆရာဘာတွေစဉ်းစားနေတာလဲလို့´ ဘာဘူက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ဆိုတာကို သူသိသည်။ သူ ဘာဘူကို အလုပ်ထုတ်ပစ်ခဲ့ဖို့ကောင်းသည်။ ပြဿနာ ပိုကြီးနိုင်သည် ဟုထင်ခဲ့လို့လည်း အခုချိန်ထိ ဘာဘူ ရှိနေတာပဲဖြစ်သည်။ သေချားစဉ်းစားတော့လည်း ဘာဘူ
ကဘာမှအမှားမလုပ်ခဲ့။ သူသာ...အရှက်မရှိ အမှားတွေကို စတင်ခဲ့သည်။
` ဖေမောင်အကြောင်းပါ...´ စကားလမ်းကြောင်းလွဲပစ်လိုက်သည်။
` ဘာလဲ...ဆရာက ဖေမောင် နောက်မိန်းမ ယူမယ်ဆိုတာကိုတွေးနေတာလား´
` မဟုတ်ပါဘူး....ကလေးတွေနဲ့ သူတစ်ယောက်တည်း... ဘယ်လိုရှေ့ဆက်မလဲဆိုတာကိုတွေးနေတာ´ ဘာဘူရဲ့ညာဖက်လက်က ပေါင်ကြားထဲက ပစ္စည်းကို အသာ ဆုတ်ကိုင်လိုက်တာကို သူမြင်ဖြစ်အောင်မြင်လိုက်သေးသည်။
` ဆရာကလည်း... ဖေမောင်ကြီးက အပေါက်မှန်ရင် လီးတောင်တည့် လူမျိုး...အခုမိန်းမဆုံးသွားပြီဆိုတော့ ... အရက်ကြိုက်တဲ့ လူ အရက်မရှိလို့ သွေးရူးသွေးတန်းဖြစ် နေသိလိုမျိုး ဖြစ်မှာကို မြင်ယောင်သေးတယ်´ ဖေမောင် က ထန်မှန်းသူသိသည်။ ဘာဘူ ပြောသလောက်တော့ ဆိုးမည်မထင်။ အရက်ကြိုက်တတ်သာလည်း သူအသိဆုံးဖြစ်သည်။
` မင်းက ဖေမောင့် အကြောင်းတော်တော် သိလို့လား´
` သိတာပေါ့...သူက အစွန်းရောက် ၀ါဒီ´ ဘာဘူဆိုလိုတာ သူနားမလည်။
` သူ က သူ့မိန်းမ တင်မကဘူး၊ သူ့ယောက်ဖကိုပါစားတာ´ ကြားသည့်နားကိုတောင်မယုံချင်။
` ခယ်မ လုပ်စမ်းပါကွာ...´
` ယောက်ဖပါ ဆရာရ... ဖေမောင်ကိုယ်တိုင်ပြောပြတာ...သူ့ယောက်ဖက ဟို......ဟို...´ သူ့ရှေ့မှာပြောရမှာကို တွန့်ဆုတ်နေသည်။ သူကပဲ..
` အခြောက်လား´ ဘာဘူက ရီကျဲကျဲလုပ်ပြီး
` ဟုတ်တယ်...အဲ့ဒီ့အပေါက်ကိုလည်း အလွတ်မပေးဘူး..၊´ ကျွန်တော် ဖြုံသွားသည်။ ကိုမောင် အဲ့ဒီလောက်တောင် ထန်မှန်းအခုမှသိသည်။ ဒါဆို ကိုမောင်က ဂေးလ် လား။ မဖြစ်နိုင်၊ ဒါဆို bi လား၊ မပြောတတ်၊ သူ့အထင် ဂေးလ်တွေနဲ့ အခွင့်ပေးလျှင်ဆက်ဆံတတ်သည့် ယောကျာ်း Straight တွေထဲတွင် ကိုမောင်လည်းပါပေလိမ့်မည်။ သူ ဆက်မပြောဖြစ်...ဘာဘူကဆက်ပြီး
` ဖေမောင်ကြီးက ပြောတယ်... သူ့မိန်းမကိုလိုးတာ ထက်ပိုကောင်းတယ် တဲ့...ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောတာပေါ့...´ သူလန့်သွားသည်။
ဘယ်လိုပဲလမ်းကြောင်းလွဲလွဲ နောက်ဆုံးတော့ ဒီဘူတာပဲပြန်ဆိုက်လာသည်။
`....´ သူပြန်မမေးတော့ ဘာဘူက ဆက်ပြောသည်။
` ဟုတ်တယ်...ဖင်က ပိုကောင်းတယ်လို့´ သူဘာဆိုဘာကိုမှ ဆက်မမေးချင်တော့၊ ကြားလည်းမကြားချင်တော့။ volume ကို ထပ်မြှင့်လိုက်သည်။ ဘာဘူ သူ့အမူအယာကို ကြည့်လျှင် သိလောက်သည်။ ဘာဘူ ကစကားပြောလျှင် အခုလို အားရပါးရ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေကို ပြောတတ်သည်။
ဘာဘူက သူ့ကို အစပြန်ဖော်ပေးနေသည်။ သူ မသိချင်ယောင်ပဲဆောင်နေလိုက်သည်။ သူနာရီကြည့်လိုက်တော့် ၁၁ နာရီကျော်နေပြီ။ ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုလျှင်ဘာဘူကို သူ့အိမ်တွင်အိပ်ခိုင်းရတော့မည်။ သူ..ဒီလိုညမျိုးကို ဘယ်လိုလုပ်ဖြတ်ကျော်ရမလဲ၊
အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း သူရေချိုးပစ်လိုက်သည်။ စိတ်မကြည်လင်မှုတွေ၊ ပင်ပန်းမှုတွေကို တပြိုင်နက် ဖြေဖျောက်ပစ်လိုက်သည်။
အောင် နှင့်တူတူ အိပ်တာထက်ပင် သူရင်တွေခုန်မြန်နေသည်။ ရေချိုးပြီး ထွက်လာတော့ ဘာဘူက ကုတင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီး TV ကြည့်နေသည်။ သူ ၀တ်နေကျအင်္ကျီနှင့်ပုဆိုးကို ပဲထုတ်ဝတ်လိုက်သည်။
` ဆရာ... ကျွန်တော် ဘယ်မှာအိပ်ရမှာလဲ´ သူဘယ်လိုဖြေရမှန်းမသိ။ အောင် လိုဘာဘူကို သူ့ဘေးနားတွင် အိပ်ခိုင်းလျှင် သူ တညလုံးအိပ်လို့ရမည်မဟုတ်။ မအိပ်ခိုင်းလျှင်လည်း မဖြစ်။
` ဆရာ... ကျွန်တော့်ကို စိတ်မဆိုးဘူးမလား´
` ဘာကို စိတ်ဆိုးရမှာလဲ´ သူ တကယ့်ကို စိတ်ပျက်လာသည်။ ဘာဘူက သူနှင့် ဖြစ်ခဲ့သည့်အကြောင်းအရာကိုပဲ ပြောချင်နေသည်။
` ဟို...အစ်ကို့ကို ကျွန်တော်... ဟိုနေ့ည က လုပ်ခဲ့တာကို..ပါ´ စကားတွေ အထစ်နေသည်။
` ပြီးခဲ့တာတွေကို အစပြန်မဖော်နဲ့..အိပ်တော့...မနက်ဖြန် ဖေမောင်ဆီသွား ရအုံးမယ်။´ ဖေမောင် မိန်းမ ကမနက်ဖြန်အသုဘ ချမည်။
သူတို့မနက်ဖြန်အလုပ်ကို သွားပြီး အောင် ကို ၀င်ခေါ်ကာ ဖေမောင် ဆီ စောစောသွားရမည်။
` အစ်ကို က ကျွန်တော့်ကို စိတ်ဆိုးနေတုန်းပဲကိုး၊ ကျွန်တော် အဲ့ဒီနေ့က မူးသွားပြီး...´
` တော်ပြီ ဘာဘူ...ဒီမှာပဲရပ်တော့..ငါထပ်မကြားချင်တော့ဘူး´ သူက စလို့ ဘာဘူက လိုက်လျောခဲ့တာကို ပြန်နားထောင်ဖို့သူ့မှာအင်အားမရှိပါ။
` မဟုတ်ဘူး၊ အစ်ကို...ကျွန်တော် မပြောပြရင်..ကျွန်တော် မနေနိုင်တော့လို့ပါ.´ သူထပ်ပြီးမပြောချင်တော့။ မကြားချင်ယောင်ပဲဆောင်နေလိုက်သည်။ ဘာဘူကဆက်ပြီးပြောသည်။
` ကျွန်တော် အဲ့ဒီညက အစ်ကို့ကို လုပ်ပြီး ဘယ်လိုမှနေလို့မရဘူး၊ အစ်ကိုက လိုက်လျောခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော်အပြစ်ရှိသလိုခံစားရတယ်၊ ကျွန်တော် အလုပ်ထွက်ဖို့ စဉ်းစားပါ သေးတယ်.. .ဒါပေမယ့်´ ဒါဆိုရင် အဲ့ဒီညက ဘာဘူလည်းတော်တော် မူးခဲ့သည်ပေါ့။ ဘာဘူကို သူကလိုက်လျော
` ဒါပေမယ့်... ကျွန်တော် အလုပ်ကမထွက်ချင်ဘူး၊ ကျွန်တော်....ကျွန်တော်... အစ်ကို့ကို ...ချစ်တယ်´ oh my god! ဘာဘူက သူ့ကိုချစ်တယ်တဲ့လား၊ ဘာဘူ ဇာတ်လမ်းတွေဆင်နေ တာလား၊ ဒါမှမဟုတ်၊ တကယ်ပဲလား၊
` ဘာဘူ ...ဒီနေ့လည်း မင်း မူးနေပြီထင်တယ်...ပေါက်ကရတွေပြောနေတယ်...ကဲ အိပ်တော့´
` ကျွန်တော်မမူးပါဘူး အစ်ကို...ကျွန်တော် အခု အဲ့ဒီညကလို ပဲမူးချင်တယ်.. ´ ဘာဘူက သူ့ကို အဲ့ဒီည ကလို သူ့ဖင်ကို ချချင်တယ်လို့သွယ်ဝှိက်ပြီးတော့ကို ပြောနေသည်။ သူဘာလုပ်ရမလဲ။ အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရလျှင် သူ ငတ်နေတာကြာပြီဖြစ်သည်။ ဘာဘူ နဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာ ညစဉ်ရက်ဆက်အပွဲပွဲ နွဲခဲ့ဖူးသည်။ သူ ဘာလုပ်သင့်လဲ။
` မင်း င့ါကိုဘာထင်လို့လဲ´
` အစ်ကို ကို ကျွန်တော် ချစ်တာပဲသိတယ်၊ ဘာဆိုဘာမှမထင်ဘူး´
` မင်းက ယောကျာ်းချင်း ကြိုက်ရအောင် ... အ...ခြောက်လား´ သူစကားတွေ ထစ်အကုန်သည်။
` အစ်ကို ထင်ချင်သလိုထင်...ကျွန်တော် အစ်ကို့ကိုချစ်တယ်´ ပြောပြီးချက်ချင်း ထိုင်နေရာကနေထလာပြီး သူ့ကို အတင်းလာဖက်သည်။
သူမရုန်းမိ၊ ဘာဘူ ၏ နှုတ်ခမ်းတွေက သူ့ နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ တေ့စပ်လိုက်သည်။ အားရပါးရပွေ့ဖက်မှုနှင့်အတူ နှုတ်ခမ်းခြင်း ထိတွေ့မှုက သူ့ကို အရည်ပျော်ကျသွားစေသည်။ သူ ကျောက်ရုပ်တရုပ်လို ငြိမ်နေလိုက်သည်။ ဘာဘူ၏ လက်တွေက သူ့ရဲ့ကျောကနေ လုံးဝန်းသော ဖင်များဆီသို့ဦးတည်နေသည်။ နမ်းနေရာမှ
` အစ်ကို...ကျွန်တော့်ကို ချစ်တယ်မလား´ သူအခုမှ အသိဝင်လာကာ..
` ဘာကို ချစ်ရမှာလဲ...ဘာဘူ မင်းရူးနေလား´
` ကျွန်တော်ကတော့ အစ်ကိုကျွန်တော့်ကို ချစ်ချစ်မချစ်ချစ် ကျွန်တော်က အစ်ကို့ကိုချစ်တယ်´ ဒီတခါ သူ့ကို ကုတင်ပေါ်လှဲချလိုက်သည်။
ပက်လက်လှန်သွားသော သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို ဘာဘူ ကအားရပါးရမှောက်အိပ်လိုက်သည်။ ပူနွေးမာတောင်နေသော ဘာဘူ လီးကြီးက သူ့ပေါင်သားတွေကို လာလာပွတ်နေသည်။ သူ့ လီးကလည်း အခုဆို အစွမ်းကုန်မာတောင်နေသည်။ သူ့လည်ပင်းတွေကို အငမ်းမရနမ်းနေသည်။ သူ့တကိုယ်လုံး အကြောတွေ အသွေးတွေထဲထိ ပူထူနေသည်။ သူ ဘာကြောင့်များအားကုန်မရုန်းမိပါလိမ့်။ ဘာဘူ့ ကျောပြင်ကို အလိုက်သင့် ပြန်ဖက်ထားလိုက်သည်။ အာခေါင်တွေခြောက်ကပ်လာကာ တကိုယ်လုံးတုန် ယင်နေသည်။ ဘာဘူ ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေက သူ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေဆီကို ရောက်သွားသည်။ ပူနွေးအိစိုနေသော ကြမ်းရှရှ နိုင်တဲ့ လျှာဖျားကလေးက သူ့နို့သီးခေါင်းလေးကို မထိတထိ လျက်ပေးနေသည်။ ရှေ့သွားဖြင့် ခပ်ဖွဖွလည်းကိုက်သေးသည်။ ကာမရေစီးကြောင်းတွင်သူ လုံးဝကို မျောပါသွားသည်။
` အား.......ဘာဘူ....မင်း........´ သူဘာပြောရမှန်းမသိ။
`...´ သူရဲ့စကားပြောတာကို တောင် မကြားဘဲ မွှန်ထူနေသည်။ မပြောမဆို ဘာဘူက ထထိုင်လိုက်ပြီး သူ့ကိုယ်ကို တွန်းပြီးမှောက်ပစ်လိုက်သည်။ သူ့ပုဆိုကို ဆွဲဖြည်ပြီး တကွင်းလုံးကို ချွတ်ချပစ်သည်။ သူ ဘာဘူ့ကို ပြန်ပြောဖို့ အားတွေမရှိတော့။ ဘာဘူ ၏ နူးနှပ်မှုတွေကြားတွင် သူ နစ်မြှုပ်ခဲ့သည်။
သူ နောက်ကိုလှည့်မကြည့်ဘဲ မျက်လုံးမှိတ်နေလိုက်သည်။ ဘာဘူ၏ လျှာဖျားလေးကူရဲ့ကျောရိုးတလျှောက် ...၊ နောက်တော့ သူ့ရဲ့ လုံးဝန်းနေတဲ့ ဖင်နှစ်မွာဆီသို့။ နွေးထွေးစိုစွတ်တဲ့ လျှာဖျားက ဖင်ကြား တလျှောက်လာပွတ်သည့်အခါမှ
` ဘာဘူ.....မင်း...တော်တော့.... ညစ်ပတ်လိမ့်မယ်.......အား............´ သူစကားတောင် ဆက်မပြောနိုင်တော့ဘဲ မျက်လုံးမှိတ်ကာနေမိတော့သည်။ အခုလို အချိန်မျိုးကို သူ တစ်နေ ကုန်တစ်နေခန်းရချင်သည်။ အား....။ အူနံရံတွေအထဲအထိအောင် ယားယံလာသည်။ သူ...မနေနိုင်တော့။
` တော်တော့...ဘာဘူ....မင်း...ငါ့ကို ...လုပ်ချင်လုပ်ပါတော့...´ သူ့ပါးစပ်ကဘဲအလိုအလျောက်ပြောထွက်သွားသည်။
` အစ်ကို ... ကျွန်တော့်ကိုကော..မပြုစုပေးတော့ဘူးလား..´
` ဒီဟာကိုလေ...´ ဘယ်တုန်းကတည်းက ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်နေမှန်းမသိ။ ရောမခေတ်က ကျောက်ဆစ်ရုပ်ထုတွေလို ကြွက်သားအဖုအထစ်တွေနဲ့။ ဖောင်းကားနေတဲ့ ရင်ညွန့်ကြားမှာ နက်စိုနေတဲ့ ရင်ဘတ်မွေးတွေဟာ မညီမညာ။ ဗိုက်တပြင်လုံးနီးပါအမွေးတွေက သူ့သွေးတွေကို ပိုဆူပွက်စေသည်။ပေါင်ကြားထဲက ညိုမည်းပြောင်တင်းနေသော ထွားလှတဲ့ ဒစ်ကြီးမှာလည်းစွဲမက်စရာ။ အကြောတွေတဖြိုင်းဖြိုင်းထနေတဲ့ လီးကြီးမှာ သူလိမ်းနေကျ လင်ဇီးဆေးပုလင်း လုံးပတ်ထက်တောင် တုတ်အုံးမည်။ ဒီလောက်ရှည်ပြီးထွားသော လီးဖြင့် သူ...အဲ့ဒီညက ခံနိုင်ခဲ့သည်မှာ သူ့ကိုယ်သူ အံ့သြရသည်။ အခု သူဒါကြီးနဲ့...။
` ဘာလုပ်ရမှာလဲ´ မသိချင်ယောင်ဆောင်တာအခုအချိန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ဟု သူထင်သည်။ သူက သာ ဘာဘူ အလိုကိုလိုက်လျောပေးသည်ဟုထင်စေချင်သည်။
` ဘာဆိုင်လို့စုပ်ပေးရမှာလဲ...မင်းကို ငါ...လုပ်ခိုင်းလို့လား´ မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားမှာ ဘာဘူက ဗြုန်းခနဲ သူ့ခေါင်းကို ဆွဲချလိုက်ပြီး လီးကြီးတည့်တည့် သူ့မျက်နှာနှင့်အပ်ထား လိုက်သည်။ ဒစ်ကြီးက သူ့နှာခေါင်းဝတည့်တည့်လာထိသည်။ ဘာအနံ့အသက်မှမရှိ။ အလိုချင်ဆုံးသော ပစ္စည်းကိုသူ ထပ်ပြီး ဟန်ဆောင်ဖို့ အားတွေမရှိတော့ပါ။ ပါးစပ်ကိုအသာ ဟလိုက်ပြီး ဒစ်ဖျားကို ငုံပေး လိုက်သည်။ ပူနွေးနွေး အထိအတွေ့က သူ့တကိုယ်လုံး တုန်ခါသွားစေသည်။
` ဒါကြောင့် အစ်ကို့ကိုချစ်တာ´ ဘာဘူက သူ့ဆံပင်တွေကိုင်ပြီး ဖီးလ်းယူနေသည်။ သူ့လျှာဖျားကို အစွမ်းကုန်သုံးကာ အချက်များစွာရစ်ပတ်စုပ်သပ်နေမိသည်။ တချက်တချက် ဆောင့်လိုက်သော ဘာဘူ့လီးကြီးကသူ့အာခေါင်ထဲထိရောက်ရောက်လာသည်။
` ဆောရီး ...ဆောရီး...ငါ့အစ်ကို ...နင်ကုန်ပြီ...ကဲ...ကျွန်တော် မနေနိုင်တော့ဘူး... .အစ်ကို လေးဘက်ထောက်ပေး´ သူ ထပ်ပြီးစုပ်ချင်သေးသည်။ သူ့ပါးစပ်ထဲတွင် တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေသော ရွှေလီးကြီးကို ထပ်စုပ်ချင်သေးသည်။ ယားကျိနေပြီဖြစ်တဲ့ သူ့ချယ်ရီပေါက်လေးကလည်း တဆာဆာ အော်နေသည်။
` ကျွန်တော်မှာ မရှိဘူး´
` အံဆွဲထဲမှာ...´ ပြောသာပြောရသည်။ ဘာဘူ့လီးကြီးက သာမန်အရွယ်ကွန်ဒုံးဆိုလျှင် ဆုတ်ပြဲသွားနိုင်သည်။
` ရှုပ်ကိုရှုပ်တယ်..´ သူ ဘာဘူ့အတွက် ဆင်သင့်လေးဘက်ထောက်ပေးထားသည်။ ကွန်ဒုံးအရောင် က အနီရောင်ဖြစ်သောကြောင့် ဘာဘူ့လီးကြီးမှာ နီရဲတွတ်နေသည်။ ခေါင်းအုံးပေါ်မျက်နှာအပ်ပြီး သူစောင့်နေမိသည်။ ဘာဘူ ကချက်ခြင်းမသွင်းသေး၊ အလျားလိုက် သူ့ဖင်ကြား ထဲတွင် ပွတ်နေသည်။
` ရပါတယ်... first time မှမဟုတ်တာ´ first time မဟုတ်ပေမယ့် ၁ လကျော်လောက်တော့ ရှိတော့မည်။ ဘာဘူက လီးကြီးကို ထိပ်ဝတွင်တေ့လိုက်သည်။ သူ့ အပေါက်လေးကို နဲ့ပြီး သွင်းနေသည်။
` အား...´ ဒစ်တခုလုံးဝင်သွားသည်နှင့် သူ့ချယ်ရီပေါက်လေးမှာ တင်းကျပ် ပြည့်ဝသွားသည်။
` အင်း...´ တဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်လာသော ဘာဘူ့လီးကြီးက သူ့တကိုယ်လုံးကို တုန်ယင်လာစေသည်။ အောင့်တောင့်တောင့်ဖြစ်မှုနှင့်အတူမပြောပြတတ်သော အရသာကိုပါ တပြိုင် နက်ခံစားရသည်။
` အား...ကောင်းလိုက်တာအစ်ကိုရာ...ကျပ်နေတာပဲ´ သူ့ခါးကို ကိုင်ပြီး ဘာဘူက စည်းချက်ညီညီ ဆောင့်ပေးနေသည်။ သူ့အပေါက်ထဲကနေ လွတ်သွားမှာကိုပင် သူစိုးရိမ်လာသည်။ ဘာဘူကို အရင်ကသူရှောင်နေတာ သူ မှားသလိုတောင် ခံစားရသည်။
` အစ်ကို ... ကောင်းလား´ သူဘယ်လိုဖြေရမှန်းမသိ။
` ဘာကောင်းတာလဲ.... ´
` ကျွန်တော် လုပ်ပေးတာကောင်းလားလို့´ ဘာဘူက သူ့အကြောင်းတွေကို ကောင်းကောင်းသိနေပုံရသည်။
` ငါ့ အစ်ကိုက ဟန်ဆောင်နေတယ်....ကျွန်တော့်ကိုချစ်တယ်မဟုတ်လား´ သူကြားဖူးတာက တချို့လူတွေက အခုလိုမျိုးအပိုင်ချုပ်ပြီးလျှင်ငွေညစ်တတ်သည်။ ဘာဘူ လဲ အဲဒီလို လူစားမျိုးထဲကပဲလား၊
` ဘာကို ချစ်ရမှာလဲ... ´
` အစ်ကိုက ညာနေတယ်..၊ အစ်ကို ကျွန်တော့်ကိုချစ်လို့ပဲ လိုက်လျောခဲ့ တာမဟုတ်လား၊´ ဘာဘူကို လိင်စိတ်နဲ့သာစိတ်ဝင်စားပေမယ့်သူ ချစ်လို့မရပါ။ ဘာကြောင့်မှန်းတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်းမသိပေ။
` ဒါဆို... အခုလို အစ်ကိုဘာလို့နေပေးရတာလဲ´ သူဘာပြန်ဖြေရမှာလဲ။
` လုပ်စရာရှိတာ မြန်မြန်လုပ်...မနက်ဖြန်အစောကြီးထရအုံးမယ်´
` ကျွန်တော်က တညလုံး အစ်ကို့ထဲမှာ စိမ်ထားချင်တာ´ သေလိုက်စမ်း။ တညလုံးတောင် စိမ်ထားရင်...သူ...။ မနက်ဖြန်ဆို ကွတကွတ နဲ့။
သူဘာမှပြန်မပြောတော့။ မျက်လုံးအသာမှိတ်ပြီး နေလိုက်သည်။ ဘာဘူ ရဲ့ဆောင့်ချက်တွေက ပိုပိုပြီးပြင်းလာသည်။ အချက်ပေါင်းများစွာ။ သူ့ စအိုထဲလဲပူထူလာသည်။
ဘာဘူ့လက်တွေက သူ့ညီငယ်ကို မသိမသာ ဆော့ကစားနေသည်။ အား....။ သူ ပြီးချင်နေပြီ။ ဘာဘူ ဆောင့်လိုက်တိုင်း သူ့ဖင်တွေကို နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်သည်။ဘာဘူ ကပိုပြီးခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်သည်။
` အား...............အား.........ထွက်ကုန်ပြီ...´ ဘယ်လိုမှပြောမပြတတ်အောင် သူ့တကိုယ်လုံးတုန်တက်သွားသည်။ ပူနွေးပျစ်ချွဲနေသော သုတ်ရေတွေက အိပ်ယာခင်း တွေပေါ်မှာ ဟိုတစက်ဒီတစက်၊
` အစ်ကို ပြီးပေမယ့် ကျွန်တော်မပြီးသေးဘူး၊´ အခုမှ သူ့စအိုထဲကပိုပြီးပူထူလာသည်။
` ကျွန်တော် မပြီးသေးဘူးလေ´
` ငါ မနေနိုင်တော့ဘူး´ သူ လေးဖက်ထောက်နေရာမှ မှောက်ချလိုက်သည်။ လီးကြီးက သူ့စအိုဝထဲကနေ ပလွတ်ဆိုတဲ့ အသံနှင့်အတူ ကျွတ်ထွက်သွားသည်။ သူ့ဝမ်းဗိုက်တခုလုံး ဟာ သွားသည်။
` အစ်ကို မတရားဘူး။ ´ သူ မှောက်ရက်သား အနားယူလိုက်သည်။ ဘာဘူ ကုတင်ပေါ်က ဆင်းသွားတာသူသိလိုက်သည်။ သူမျက်လုံးမှိတ်ပြီးနေနေလိုက်သည်။
` ဘာဘူ မင်းဘာလုပ်တာလဲ´ သူ့အခန်းထဲက ပလတ်စတစ်ကြိုးတွေကိုယူပြီး သူ့လက်တွေကို တုတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ခြေထောက်တွေ။အားပျော့နေတဲ့သူ့ကို ကြိုးတုတ်လိုက်တာ တကယ့်ကို ခဏလေး။
` မင်း...ဘာလုပ်တာလဲ... ဘာဘူ...တော်တော့´
` ကျွန်တော် ပြီးအောင်လုပ်ချင်လို့...အစ်ကိုကို ကျွန်တော် ချစ်တယ်။´
` မင်းင့ါကို တကယ်ချစ်ရင် ဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူး´ သူ့လက်တွေကို ကုတင်ခေါင်းရင်းက တိုင်နှင့်ပါပူးချည်လိုက်သည်။ အခု သူကမှောက်ရက်သား။
သူ့ဆီးစပ်အောက်နားကို ခေါင်းအုံးတလုံးနှင့်ခုလိုက်သည်။ မိုးပေါ်ကို မျှော်နေသော သူကဖင်နှစ်လုံးမှာ လိုးပါဟု ပြောနေသလိုပင်။
` ကျွန်တော့်ကို ခွင့်လွတ်ပါ အစ်ကို...ကျွန်တော့်ကို အလုပ်ထုတ်ပစ်ချင်ရင် ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ..။ အစ်ကိုကို့ကျွန်တော် အခုလို လုပ်ချင်နေတာကို လုပ်လိုက်ရမှ ကျွန်တော် နေလို့ထိုင်လို့ရမှာပါ။ ´
` အား......´ မပြောမဆို အားနဲ့ဆောင့်သွင်းလိုက်တဲ့ဘာဘူ့ လီးကြီးက သူ့စအို အတွင်းသားတွေကို ပါပွတ်သပ်သွားသည်။ အကြောတွေကိုတခုခု နှင့်စုပ်ယူလိုက်သလို။ သူ ဘာဘူ့ကို အလုပ်ထုတ်ရက်ပါ့မလား။ သူ မက်နေတဲ့ အိပ်မက်တွေထဲမှာ ဘာဘူက မင်းသားဖြစ်ခဲ့သည်ပဲ။ တခါတလေ ဖေမောင်တောင် ပါသေးသည်။ အိုး....သူ အလိုက်သင့်နေပေးလိုက်သည်။ ဘာဘူကို အပြစ်မပြောချင်တော့။ တကယ်တော့ ဘာဘူကသာ သူလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့လူပင်။ ဘာဘူကို ကျေးဇူးတောင် တင်ရအုံးမည်။ အချက်တိုင်း စည်းချက်မှန်စွာသွင်းထုတ်နေသည်။ ဆောင့်ချက်တွေက ပိုပိုပြင်းလာသည်။
` ကျွန်တော်...ပြီးတော့မယ်....´ သူ့ရဲ့စအိုထဲက ကြွက်သားတွေကို ညစ်ထားပေးလိုက်သည်။
` အား......ကျပ်လိုက်တာ...အား...ကောင်းလိုက်တာ...ရှီး........´ တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ခုန်နေတဲ့ ဘာဘူ့လီးကြီးက သူ့အထဲမှာရှိတုန်းပင်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲထုတ်လိုက်တော့ ဒုတိယ အကြိမ် ဟာ သွားသည်။ သူ့ကြိုးတွေကို ဘာဘူ ဖြည်ပေးလိုက်သည်။
ပျော့သွားသောဘာဘူ့လီးကြီးက ပြောင်လက်နေသည်။ သူနှင့်ဘာဘူ မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပြီး ဘာဘူ့မျက်လုံးတွေကို စိုက်ကြည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူ...၊ သူ...။ ဘာဘူ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို အငမ်းမရ နမ်းလိုက်သည်။
ဘာဘူ ကအလိုက်သင့်ပြန်နမ်းသည်။ သူတို့နှစ်ဦး ဒီညတော့ ကာမရေစီးကြောင်းတွေမျောပါရင်း....။ သူ ဘာဘူ့ကို .... အခုတော့...သူ....ချစ်မိသွားပြန်ပြီဟုထင်သည်။
ဖေမောင် မိန်းမ အသုဘ ချပြီးတော့ သူတို့တွေပြန်လာခဲ့သည်။ ဖေမောင် ကိုတော့ ရက်လည်ပြီးမှ အလုပ်လာခိုင်းထားသော်လည်း ဖေမောင်ကမရ။ အိမ်မှာချည်းနေလျှင် သူ့မိန်းမကိုပို သတိရ လိမ့်မည်ဟု ဆိုသည်။ ပြောမရသည့်အဆုံး မနက်ဖြန်မှလာခိုင်းထားသည်။ ဒီနေ့တော့ ၅ နာရီ
` ကဲ...ပြန်လို့ရပြီ´ အောင် နှင့်ဘာဘူက စကားတွေပြောနေသည်။ ဘာအကြောင်း အရာကိုပြောနေမှန်းသူ မှန်းလို့မရ။ သူပြောလိုက်မှ စကားပြောနေတာ အရှိန်ပျက်သွားသည်။ အောင်က
` အစ်ကို...ကျွန်တော် ဒီနေ့ကော အစ်ကိုနဲ့လိုက်အိပ်လို့ရမလား´ ဘာအကြောင်းကြောင့် အောင် ဒီလိုပြောမှန်းသူ မှန်းလို့မရ။
မရဘူး ဟုပြောရင်လည်း သူ ရိုင်းရာကျမည်။ အမှန်တိုင်းဝန်ခံရလျှင် သူ ဒီနေ့လည်း ဘာဘူ နှင့် နှစ်ပါးသွားချင်သည်။ အောင်ကို သူ ညီတယောက်လိုပဲဖြူစင်စွာဖြင့်ချစ်ချင်သည်။ သူ ဘာကို ဘယ်လိုဖြေရမှန်းမသိ။
` ဟို...အစ်ကို အခုချက်ခြင်းမပြန်သေးဘူး၊ ချိန်းထားတာလေးတခုရှိတယ်။..အောင် အိမ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ´ ဘာဘူကတော့ ဘာမှကိုဝင်မပြော။ ဘာဘူပြောလို့အောင်က လိုက်အိပ်မည် ပြောတာ လား။ ဒါမှမဟုတ်... အောင်ကိုယ်တိုင်ကပဲ..။
` ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူး..။ အစ်ကိုနဲ့တူတူအိပ်ချင်ယုံသက်သက်ပါ။ အစ်ကို ဒီနေ့အဆင်မပြေလည်းရပါတယ်..နောက်နေ့ပေါ့´
ဟူး..။ အောင် သူ့ကိုသံယောဇဉ်တွယ်နေပြီလား။ သူ အောင်ကို မငြင်းချင်ဘဲ ငြင်းလိုက်ရသည်။ ဆောရီးပဲ အောင်..။ အစ်ကို့ကို ဒီနေ့တော့ ဘာဘူနဲ့နေခွင့်ပေးပါ။
` အိုကေ... အစ်ကို အဆင်ပြေတဲ့နေ့ အောင် လာအိပ်...´ခေါင်းလေးကို အသာပုတ်လိုက်သည်။ ဘာဘူရဲ့အကြည့်တွေကသူ့ကို တခုခုပြောချင်နေပုံရသည်။
` ဒါဆို..ကျွန်တော် ပြန်တော့မယ်..´
` ဘာဘူ ကောမပြန်သေးဘူးလား..´
` ဘာဘူက ပြန်လို့မရသေးဘူး...ကုန်တစ်ခုလာပို့စရာရှိသေးတယ်...၊´ ဘာဘူက
` ဆရာက ဘာဘူ့ဆိုရင် အမြဲ နှိပ်စက်နေကျလေ...။´ ဘာဘူကပြောသာပြောသော်လည်းစိတ်ထဲကပါပုံမပေါ်။
` ကျွန်တော် ကော နေပေးဖို့လိုရင်ပြောလေ...´
` ရပါတယ်အောင်ရဲ့...ဘာဘူ တစ်ယောက်တည်းနဲ့ရပါတယ်။ ´ အောင် မျက်နှာတချက်ပျက်သွားသည် ဟုသူထင်သည်။
ထမင်းချိုင့်လေးကို ယူပြီး လှည့်ထွက်သွားသည်။
` သွားပြီ အစ်ကို...ဘာဘူ...သွားပြီ´ အောင် ပြန်သွားတာနဲ့ဘာဘူက တခါးကို ပိတ်ချလိုက်သည်။
` အစ်ကို သူ နဲ့ဖြစ်နေတာလား´
` ဘာကိုဖြစ်ရမှာလဲ..´ ဘာဘူ့အသံတွေကတင်းမာနေသည်။
` သူက ဘာလို့အစ်ကိုနဲ့အိပ်ချင်နေရတာလဲ...´ ဘာဘူက သ၀န်တိုတတ်မှန်းအခု မှသူသဘောပေါက်တော့သည်။အကြောင်းစုံကိုရှင်းပြလိုက်သည်။ ဘာဘူက စာရေးစားပွဲကို ဖင်တင်ရုံ မှီပြီးရပ်နေသည်။ ဘာဘူရဲ့ ချွေးနံ့ပြင်းပြင်းက သူ့စိတ်တွေကို ရိုင်းသွားစေသည်။ ရဲသစ် ဆိုတဲ့လူ တစ်ယောက် ကနေ...တခြားတစ်ယောက်သို့ပြောင်းသွားသလိုပင်။ ဘာမှမပြောမဆို ဘာဘူရှေ့မှာ ဒူးထောက်ချလိုက်သည်။
အမွေးတွေထူထပ်နေသော ဘာဘူ၏ ခြေသလုံးတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်များမှတဆင့် သူလိုချင်ဆုံးသော ဘာဘူ့ ပစ္စည်းရှိရာသို့ တဖြည်းဖြည်း လက်ဖြင့်ပွတ်သပ်လိုက်သည်။ ဖောင်းကားနေသော ဘာဘူ့ ပေါင်ကြားက ပစ္စည်းကို လက်ဖြင့် အုပ်မိုးလိုက်သည်။ ပူနွေးနေသော လိင်တံကြီးက တဒုတ်ဒုတ်ခုန်နေသည်။ ဘာဘူ က သူ့ဆံပင်တွေကို လက်ဖြင့် အသာအယာ ဖွနေသည်။ ပုဆိုးကပုံစကို သူဖြည်ချလိုက်သည်။ အနက်ရောင် အတွင်းခံ ပေါ်တွင် အမြောင်းလိုက်ထနေသော ဘာဘူ့ လိင်တံကြီးကို သူ ငေးမော မိသည်။
ဘောင်းဘီအပြင်ကနေ လက်ဖြင့် မထိတထိ ပွတ်သပ်လိုက်တော့ ဘာဘူ့ထံမှ ငြီးသွားသံကို သူကြားလိုက်သည်။ သူ နှုတ်ခမ်းတွေကိုကပ်လိုက်တော့
` အစ်ကို...နေအုံး... ကျွန်တော် ရေသွားဆေးလိုက်အုံးမယ်´ ဘာဘူက သူ့ကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းပေးချင်ပုံရသည်။
` မလုပ်ပါနဲ့... ချွေးစော်တွေကော သေးစော်တွေကော နံနေတာ.´ သူ ခပ်ပြင်းပြင်း တချက်ရှုလိုက်ပြီးမှ ဘာဘူက ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားသည်။ သူ မလိုက်သွားတော့။ ဘာဘူ ရေချိုးခန်းက ထွက်လာတော့ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း။သူ့ရင်ဘတ်ထဲက နှလုံးသားတစ်ခုလုံးပြုတ်ထွက် မတတ် သူရင်တွေ ခုန်နေသည်။ သူ ထိုင်နေကျ ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်နေတော့ ဘာဘူက စားပွဲခုံပေါ်တွင် လာထိုင်သည်။ အစွမ်းကုန်ထောင်မတ်နေသောဘာဘူ့လီးကြီးမှာ တဒိတ်ဒိတ်ဖြင့်ခုန်နေသည်။ အရေပြားထူထူကလည်း ဒစ်ပြုတ်နေပေမယ့် ဒစ်တ၀က်လောက်ကို အုပ်ထားသေးသည်။ သူ မျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေမိသည်။ ဘာဘူက သူ့ခေါင်းကို ကိုင်လိုက်ပြီး လီးကြီးရှိရာသို့ဦးတည်ပေးသည်။ လီးကြီးကို ညာလက်ဖြင့် ဆုတ်ကိုင် လိုက်ပြီး လျာဖျားလေးဖြင့် အရသာခံလိုက်သည်။
` အား...ပါး...´ ဘာဘူ၏ အော်သံကြောင့် ဒစ်တခုလုံးကို ပါးစပ်ထဲအပြည့်ငုံ ထားလိုက်သည်။ တုတ်ထိုး သကြားလုံး စုပ်သလို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့စုပ်ပေးနေမိသည်။ ခေါင်းကိုလည်းရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပေးလိုက်သည်။ တရှီးရှီး တအင်းအင်း နှင့်ဘာဘူ ကောင်းချင်တိုင်းကောင်းနေသည်။
` အား...အစ်ကို...အမှုတ်တော်တယ်....အား....´ ဘယ်လောက်တောင်ကြာသွားသည်မသိ။ သူ့ပါးချောင်တွေတောင် ညောင်းလာသည်။ ငံကျိကျိ အရသာကိုလည်းရလိုက်သည်။
` အစ်ကို...ကျွန်တော်...ထွက်တော့မယ်..ခေါင်းဖယ်...´ ဘာဘူ စကားကိုသူ နားမထောင်ဘဲ အရှိန်ပြင်းပြင်းစုပ်ပေးနေလိုက်သည်။
ပူနွေးကျိချွဲ နေသော ပစ်ခဲခဲ ငံကျိကျိ သုတ်ရေတွေက သူ့အာခေါင်ထဲကို ပန်းထည့်လိုက်သည်။ ပါးစပ်ထဲ သုတ်ရေတွေပြည့်လျှံသွားသည်။
` အစ်ကို....ဆောရီး...ဆောရီး...´ ပါးစပ်ထဲက သုတ်ရေတွေကို မထုတ်သေးဘဲ ဘာဘူ့ရဲ့မပျော့တပျော့လီးကြီးကို ထပ်စုပ်ပေးလိုက်သည်။
` အား.....အစ်ကို..အား.........ရှီး.......´ သူရေချိုးခန်းထသွားပြီးမှ ထွေးထုတ်ပစ် လိုက်သည်။ သူ့ပါးစပ်ကိုသေချာဆေးပြီးထွက်လာတော့ ဘာဘူက ရေချိုးခန်းအပေါက်ဝတွင် လာစောင့်နေသည်။
` ကျွန်တော်အားနာလိုက်တာ...ကျွန်တော် မအောင့်နိုင်ဘဲ....အစ်ကို့ပါးစပ်ထဲ...´ သူလက်ကာပြလိုက်သည်။
` မင်းငါ့ကို ကတိတခုပေးမလား´
` အခုဖြစ်တာတွေကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပါဘူးဆိုတာ´ ဘာဘူက အားရပါးရရီ လိုက်သည်။ သူ စိတ်ပျက်သွားသည်။
` ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပါဘူးအစ်ကိုရာ...စိတ်ချပါ.. အစ်ကိုကိုမေးစရာ တစ်ခုရှိတယ်..အစ်ကိုအမှန်အတိုင်းဖြေ´ ဘာဘူမေးမည့်မေးခွန်းကို သူမှန်းလို့မရ။
` အစ်ကို ကျွန်တော့်ကို ချစ်ရဲလား´ သူချစ်တယ်ဆိုတာကို အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရမည်လား။ သူ...ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
` အစ်ကို က ကျွန်တော့်ကို မချစ်ဘဲ အခုလို လုပ်ပေးနေတာ မလိုချင်ဘူး´ လူထူးလူဆန်းနဲ့လာတွေ့နေသည်။
` ဒါဆို...ဘာဘူ ကိုယ်မေးတာအရင်ဖြေ...´ ခေါင်းတချက်ညိတ်ပြလိုက်သည်။
` ဘာဘူက ဂေးလ်လား´
` ဂေးလ်လားဆိုတော့ ဂေးလ်ပါလို့ပဲဖြေရမှာပဲ... အစ်ကို ကျွန်တော့်ကို စိတ်တော့မဆိုးနဲ့..မြွေမြွေချင်းခြေမြင်တယ် ဆိုတဲ့စကားပုံရှိတယ်မဟုတ်လား´ ဘာဘူပြောသည့်ပုံအရ...သူဟာ ဂေးလ်ဆိုတာ ဘာဘူက အစောကြီးကတည်းကသိတာပေါ့။ ဒါဆို...၊
` ကောင်းပြီလေ...။ မင်းမေးတာကို ကိုယ်ဖြေမယ်...ဘာဘူကို ချစ်ပါတယ်၊´ ဘာဘူက ဘာမှပြန်မဖြေဘဲ သူ့ကိုတအားဖက်ထားလိုက်သည်။ ဒါတွေဟာ အိပ်မက်တွေပဲလား။ အိပ်မက်တွေဆိုရင်လည်း နိုးထစရာမလိုတဲ့အိပ်မက်ပဲဖြစ်ချင်သည်။ ဘာဘူ ကအခုထိ ပုဆိုးပြန်မ၀တ်သေး။ သူ ဘာဘူ့ကို အားနဲ့ပြန်ဖက်ထားလိုက်သည်။ သူ ဘာဘူ့ချွေးနံ့တွေကို သူ့အကြိုက်ဆုံး CK ရေမွေးထက်ပင် ကြိုက်သွားသည်။ သူ...ဘာဘူကို တကယ်ချစ်မိသွားသည်။
ညက တိတ်ဆိတ်နေသည်။ ကွန်ပျုတာရှေ့တွင်ထိုင်ရင်း MHS ထဲကိုဝင်ကြည့်မိသည်။ ဒီနေ့ကော ၀တ္ထုတွေ ဘယ်သူအသစ်တင်ထားလဲဆိုတာကို ရှာကြည့်လိုက်သည်။ Alex Aung ရဲ့ Uncle Kyaw ၀တ္ထုအသစ် တင်ထားသည်။ သူ အေးအေးဆေးဆေး ဇိမ်နှင့်ဖတ်နေလိုက်သည်။ အားပါး....။
ဇာတ်လမ်းထဲတွင် ဈာန်ဝင်သွားသည်။ အပြီးထိ တခါထဲဖတ်ဖြစ်သွားသည်။ Alex Aung က ဘာသာပြန် တွေကော ကိုယ်တိုင်ရေးတွေကောကောင်းသည်။
သူ အဲ့ဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုးတွေရေးချင်သည်။ ခက်တာက စာရေးနိုင်တဲ့အင်အားသူ့တွင်မရှိ။ ဖတ်ပြီးတော့ Queer as Folk season5ကိုကြည့်သည်။ သူ့အတွက်ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက တကယ့်ကို စိတ်ဖျော်ဖြေပေး မြဲဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းထဲက brain, မိုက်ကယ်, justin စတဲ့ ဇာတ်ကောင်များက သူနှင့်အတူ တသားတည်း ဖြစ်နေသည်။ ဘရိုင်ရန်ကဲ့သို top ဂေးလ်တယောက်လောက်လိုချင်သလို၊ ဘရိုင်ရန်ကို တိတ်တခိုးချစ်နေသော မိုက်ကယ် လည်းဖြစ်ချင်ပြန်သည်။
ညည ဆို သူတို့တွေသွားတဲ့ ကလပ်ကိုလည်းသွားချင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်းဇာတ်လမ်းထဲက အတိုင်း gay club တွေရှိချင်သည်။ အပြတ်ကဲလို့ရသည်။ အပြတ်ကလို့ရသည်။အပိုင်းတပိုင်းပြီးတော့ သူကွန်ပျူတာ ကို ပိတ်ပြီး အိပ်လိုက်တော့သည်။ ညက တော်တော့်ကို တိတ်ဆိတ်နေပြီ။ အခု ဆိုဘာဘူ အိပ်ရင်း အိပ်မက် ပင်မက်နေလောက်ပြီ။ အောင် ကော... အခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ။ သူ မနက်ဖြန်ဘာဘူ မသိအောင် အောင်ကို ဟိုနေ့ကလိုထမင်းတူတူစားပြီး ညတူတူအိပ်မည်။ အတွေးတွေထဲ သူနစ်မြုပ်နေလိုက်သည်။ စိတ်ကူးယဉ်မှုသည် သူ့အတွက်တော့ အပန်းဖြေစရာ အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ စိတ်ကူးယဉ်သည့်အခါ မည်သူမှ ကဲ့ရဲ့ခွင့် ပိတ်ပင်ခွင့်မရှိသလို...လှောင်ရယ်ခွင့်လည်းမရှိပါ။ သူရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာလေးထဲမှာ ပျော်မွေ့နေမိသည်။ သူ...အတွေးထဲတွင် လိုက်ပါသွားရင်းနှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်သွားသည်။
`ကိုရဲ...မထသေးဘူးလား...´ မျက်လုံးများက ကျိန်းစပ်နေသည်။ ထို့အတူ သူ့ချယ်ရီပေါက်ကလေးက ပါ ကျိန်းစပ်နေသည်။မျက်ခွံကို အသာပွတ်လိုက်ရင်း မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။
` ကိုမောင်....´ ၀တ်နေကျ စွပ်ကျယ်လက်ပြတ်နဲ့ ဖေမောင် က သူ့ဘေးနားတွင်ရပ်နေသည်။
` ကိုရဲက အိပ်ပုပ်ကြီးလိုက်တာ´ ဖေမောင် ဘယ်တုန်းက သူ့အခန်းထဲကို ရောက်လာမှန်းမသိ။
` ကိုမောင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကျွန်တော့် အခန်းထဲရောက်လာတာလဲ´ ဖေမောင်က သူ့လက်မောင်းတွေကို တချက်ပွတ်လိုက်ရင်း
` အလုပ်ရောက်တော့ ကိုရဲ မလာသေးလို့ ဒီကိုလာတာ´ ဒါဆိုရင် သူ အိပ်တာ တော်တော်ကြာသွားပြီထင်တယ်။
` မရောက်ကြသေးဘူး...ကိုရဲကို လာခေါ်တာ´
` အင်း....ပြီးရော..ကျွန်တော် ရေချိုးပြီးလာခဲ့မယ်´ သူရေချိုးခန်းထဲထွက်လာခဲ့သည်။ ဖေမောင်ကတော့ သူ့ကုတင်ပေါ်တွင်ထိုင်နေသည်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖေမောင်က သူ့ကိုလာနှိုးသည်။ ဆပ်ပြာကို အကြိမ်ကြိမ်တိုက်မိသည်။ ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိ။ အေးစက်နေတဲ့ရေပန်းတွေအောက်မှာ သူအကြာကြီးနေပစ်လိုက်သည်။
` ဒုန်း...ဒုန်း........´ ရေချိုးခန်းတံခါးတွေကိုလာခေါက်သည်။
` ကိုရဲ...မပြီးသေးဘူးလား... အအေးမိနေအုံးမယ်´
` ပြီးတော့မယ်... ´
` ကိုရဲ....တံခါးဖွင့်ပေးလို့ရမလား´ ဖေမောင်က သူ့ကိုတခါးဖွင့်ခိုင်းသည်။ ဘာလုပ်မလို့လဲ။
` အစ်ကို အပေါ့သွားချင်လို့...´ အိမ်သာနှင့်ရေချိုးခန်းတဆက်တည်းရှိသောကြောင့် ရေချိုးနေလျှင် အိမ်သာ အသုံးပြုလို့မရ။
သူ ဖွင့်ပေးရမလား။ ခဏစောင့်ခိုင်းရမလား။ တန်းပေါ်က မျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုယူပြီး ခါးမှာပတ်လိုက်ပြီးမှ တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်သည်။
` ဆောရီးပဲ ကိုရဲ..ကျွန်တော်က ဆီးမအောင့်နိုင်လို့..´
` ရပါတယ်... ယောကျာ်းလေးချင်းပဲဟာ...´ ဖေမောင်ကပြောပြောပြီးချင်း ပုဆိုးကိုလှန်လိုက်သည်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီမ၀တ်ထား။
ညိုညစ်ညစ် နှင့် တွဲကျနေသော ဂွေးဥကြီးပေါ်တွင် ဒစ်ပြုတ်နေသော မပျော့တပျော့လီးကြီးကိုတွေ့ရသည်။ မည်းနက်တွေသော လမွေးအုံကြီးဘေးတွင်ကောက်ကွေးနေတဲ့ အမွေးများက တောထနေသည်။ လီးကြီးရဲ့လုံးပတ်ကလည်း သာမန်လီးတွေရဲ့တောင်နေတဲ့လုံးပတ်လောက်ရှိသည်။ ဒစ်ကြီးမှာ ပင်ပေါင်
လုံးလောက်ရှိသည်။ သူ...မင်သက်စွာငေးမိသွားသည်။ ဖေမောင် တွင် ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့လီးကြီးရှိနေမှန်း သူအခုမှသိရသည်။ ဒါတောင် မပျော့တပျော့ပဲရှိသေးသည်။ ၀ါကျင်ကျင် ဆီးများက ဒစ်ထိပ်ကနေ ဝေါခနဲထွက်ကျလာသည်။ သူကြည့်နေတာကို ဖေမောင် သတိထားမိသွားပုံရသည်။
` ကိုရဲ ကလည်း ရှက်နေပြန်ပြီ...တပတ်ကြီးပတ်ထားတာ ကောင်မလေးကျနေတာပဲ´
` ဟာဗျာ...ကိုမောင် ကလည်း..´
` အစ်ကိုတောင် မရှက်ပဲ ကိုရဲရှေ့မှာလှန်ပေါက်ရဲသေးတာပဲ...ချွတ်ချလိုက်စမ်းပါ...တော်ကြာ ကိုယ်သုတ်တဲ့အခါ တပတ်က ရေစို
နေပါအုံးမယ်´ သူ ကိုမောင်ပြောတဲ့အတိုင်းတဘက်ကို ဖြေချလိုက်သည်။ ကိုမောင် လီးကြီးကို ဆက်ကြည့်ချင် ပေမယ့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ကနေ ကိုမောင်ကိုကျောပေးပြီးရပ်နေလိုက်သည်။
` အားရှားပါး...ကိုရဲ ဖင်တွေက ဖြူဖွေးနေတာပဲ..´
` ကိုမောင် ပြီးရင်...ကျွန်တော်ရေဆက်ချိုးတော့မယ်...´
` ဒုန်း´ ဆိုတဲ့အသံကြားမှ သူ တံခါးဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ ရင်တွေခုန်မြန်နေသည်။ သူရေအမြန်ချိုးလိုက်သည်။ မျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုလှမ်းယူတော့ ...မရှိ။ ဒါဆို..ကိုမောင်...ယူသွားသည်ပေါ့။ သူ ရေချိုးခန်းတံခါးကို အသာဟရင်း
` ကိုမောင်...ကျွန်တော့် မျက်နှာသုတ်ပုဝါကော..´
` ရေစိုနေလို့ လှမ်းပေးထားတယ်´
` ကျွန်တော့်ကို ပြန်ယူပေးပါလား...´
` ငါ့ညီက ရှက်နေပြန်ပြီ။ ဒီတိုင်းထွက်ခဲ့...အပြင်ရောက်မှပေးမယ်´ ဖေမောင် ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိ။ သူ ခပ်ညစ်ညစ် နှင့်ပဲ လက်နှစ်ဖက်ကို ညီငယ်ကို အုပ်ပြီး ထွက်လာခဲ့သည်။
` ကိုရဲက တော်တော်ရှက်တတ်တာပဲ...ကောင်မလေးအတိုင်းပဲ...´ ကောင်မလေးလို့ပြောတာနှစ်ခါတောင်ရှိပြီ။ ဖေမောင် သူ့ကိုဘာတွေပြောချင်နေလို့လဲ။
` ကျွန်တော့်ကို ယူပေးလေ...ချမ်းလားပြီ´ ဖေမောင်က မျက်နှာသုတ် ပုဝါကိုလှမ်းပေးရင်း...သူ့လက်တွေကို ဖယ်လိုက်သည်။
` ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေး...ကိုရဲ လည်းမသေးဘူးပဲ..´ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ နှင့်ချက်ခြင်းအုပ်လိုက်သော်လည်းမမီလိုက်။
` ကိုမောင် အပြင်ကစောင့်နေ...အင်္ကျီလဲပြီးထွက်လာခဲ့မယ်´
` ဒီမှာပဲစောင့်တော့မယ်.....ခေါင်းအမြန်သုတ်... အအေးမိနေအုံးမယ်´ အောင် ကိုသူပြောတဲ့စကားတွေကို ဖေမောင် ပြန်ပြောနေသည်။
ဖေမောင်က သူ့နားကပ်လာပြီး သူ့မျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုယူလိုက်သည်။ သူက အခုဆို ကိုယ်တုံးလုံး။ မှန်ရှေ့မှာ မတ်တပ်ရပ်ရင်း မှန်ထဲကနေ ဖေမောင်ကိုကြည့်လိုက်သည်။ တပတ်နှင့် အသာအယာ သုတ်ပေးနေသည်။ ဖေမောင် ရဲ့ညီငယ်က သူ့အောက်ပိုင်းကို လာလာထိသည်။ ဖေမောင်က ခေါင်းကနေ သူ့လည်ပင်း
တွေကို သုတ်ပေးသည်။ သူ ငြိမ်ခံနေလိုက်သည်။ နောက်...ကျောကနေ..သူ့ရဲ့ ဖင်များဆီသို့ ဦးတည်သွားသည်။
` ကိုရဲ ဖင်တွေက ဖွေးပြီးလုံးနေတာပဲ။ ဂျပန်မဖင်ကျနေတာပဲ´ သူတော်တော်လေးတင်းသွားသည်။ တချိန်လုံး ဒီကောင်မလေးနဲ့တူသည်ဆိုတာကိုပဲထပ်ခါတလဲလဲပြောနေသည်။
` ကိုမောင် ကြိုက်လို့လား´
` ကြိုက်တာပေါ့...´ အရွဲ့တိုက်ပြီးမေးတာကို တကယ်ထင်ပုံရသည်။
` ဘာလဲ... ကိုရဲက ဖေမောင်ကို ကျွေးမလို့လား´ သွားပါပြီ။ သူ...တကယ် ကျွေးရမည်လား။ ကိုမောင့် ရဲ့ လီးကြီးကို သူခံနိုင်တဲ့အင်အားရှိလို့လား။
` မကျွေးလဲစားမှာပဲ´ သူ့ခါးတွေကိုဖေမောင် အားနဲ့ဖက်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်ကို တင်လိုက်သည်။ ကုန်ထမ်းသူတယောက်အနေနဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်လောက်တော့ အသာအယာပဲမလိုက်သည်။ သူရင်တွေတုန်လာသည်။ အာခေါင်တွေခြောက်လာသည်။ မှောက်ရက်သား သူ့ကိုယ်ပေါ်တွင် ကိုမောင် က
လာဖိထားသည်။ ကြမ်းတမ်းပြီးစူးရှနေတဲ့ ကိုမောင် နှုတ်ခမ်းတွေက သူ့ကျောပြင်တွေကို နမ်းနေသည်။ သူ...လုံးဝကိုမရုန်းမိ။ ကြမ်းရှရှ ကိုမောင်လက်တွေကသူ့ဖင်ကြားထဲကို နှိုက်နေပြန်သည်။
` ကိုရဲက နူးညံ့နေတာပဲ...အစ်ကိုမိန်းမနဲ့တခြားစီ..´
`...´ သူဘာဆိုဘာမှမပြောတော့ဘဲ ဖေမောင် ပြုသမျှကို နုနေတော့သည်။ ဖင်ကြားထဲကိုခုလုခုလု နှင့်ဖေမောင်ရဲ့ ပူနွေးတဲ့လီးကြီးကအစွမ်းကုန်ထိုးနေသည်။
` ထွီ...´ တံတွေးထွေးသံနှင့်အတူ သူ့ဖင်ဝလေး စွတ်စိုသွားသည်။ ပြီးတော့...
` အား..........နာတယ်......အား....´ အားနှင့်ဆောင့်လိုက်သော ဖေမောင့်လီးကြီးက သူ့စအိုဝလေးကို အတင်းဖြဲပြီးဝင်သွားသည်။
ဒါတောင် ဒစ်ထိပ်ဖူးပဲ ၀င်သွားပုံရသည်။
` တော်ပြီ..ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တော့...မရတော့ဘူး..´ သူတကယ်ကို နာသွားသည်။ တခါမှ ဒီလောက်ထိ မီးမပွင့်ဖူး။
` တကယ့်ခဏ ဆိုခဏလေးပါပဲ...ဖေမောင်က မြန်ပါတယ်´ ပြောရင်းနှင့် ပင် လီးကြီးကို ထပ်ထိုးထည့်လိုက်သည်။ အတွင်းသားတခုလုံး ပြည့်ကျပ်သွားသည်။
` ကိုမောင်တာ ကောင်းနေတာ ကျွန်တော် သေတော့မယ်´ သူ့ဂုတ်သားတွေကိုလည်း ကိုက်ထားသေးသည်။ ကြောင်မိတ်လိုက်တာနှင့်ပင်တူနေသေးသည်။ လီးကြီးကို ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တိုင်း တကိုယ်လုံးအကြောတွေ ထုံကျင်သွားသည်။
` ကလင်...ကလင်....´ ဖုန်းလာနေသည်။
` ကိုမောင်...ကျွန်တော် ဖုန်းသွားကိုင်လိုက်အုံးမယ်´
` ကလင်....ကလင်.........ကလင်......´ ဖုန်းက အဆက်မပြတ်မြည်နေသည်။ ဖေမောင် ကအဆက်မပြတ် သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်
လုပ်နေသည်။ သူ့အောက်ပိုင်းတပိုင်းလုံးထူပူနေသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် နေသားကျလာသည်။
` သား .....မင်းရဲ့ဖုန်း...´ ဒါ အဖေ့ အသံပဲ..။ သွားပြီ။ သွားပြီ။
` သား...မထသေးဘူးလား...´ သူ့ ခြေထောက်တွေကို တယောက်ယောက်က လှုပ်နှိုးလိုက်သည်။
` သား...နေကောင်းရဲ့လား..´ စူးရှတဲ့ အလင်းရောင်က သူ့မျက်လုံးတွေထဲ တည့်တည့်ဝင်လာသည်။ မျက်လုံးတွေကျိန်းစပ်သွားသည်။
` ငါ့သား...နေကော ကောင်းရဲ့လား...အဖေက အလုပ်သွားပြီတောင်ထင်တာ..´ သူ့ ပထမဆုံးစဉ်းစားမိတာ...ဖေမောင်။
` ဖေမောင် ခုနပဲဖုန်းဆက်တယ်....သားမလာသေးလို့တဲ့...ဒါကြောင့်...အဖေ သားအခန်းထဲလာကြည့်တာ´ လက်စသတ်တော့ သူအိပ်မက် မက်နေတာပဲ။ ယောင်ယောင်မှားမှား သူ့ဖင်လေးကို ကိုင်ကြည့်လိုက်သည်။ စိတ်ကြောင့်လားတော့မသိ။ စပ်ဖျင်းဖျင်းနှင့်။
` ကျွန်တော် နေကောင်းပါတယ်...ညက နဲနဲဥာဉ့်နက်သွားလို့ပါ´
` ဒါဆို...အဖေသွားပြီ..။ ´ သူ ပြုံးလိုက်မိသည်။ သူ့အိပ်မက်တွေ ...။ ထူးဆန်းတဲ့သူ့ အိပ်မက်တွေကို...သူ...။ အိပ်မက်ထဲမှ မနိုးထချင်တော့။
စာကြွင်း။ ။ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးသည် စာရေးသူ ၏ စိတ်ကူးသက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။
Posted by Alex Aung at 4:38 PM No comments: